နိုင်ငံရေးသမားတို့အတွက် အမြင်မရှင်းသည့်မေးခွန်းများ ~ Myanmar Express
8 December 2010 18:30
မင်းတို့ ဒီမိုတွေ အဲ့ဒါပဲ... ဘာစောက်ဆင့်မှ မရှိဘူး... မေးထားတာတွေ ဖြေလေ... ပြန်ချေလေ... မပြေနိုင်တော့ ငြိမ်ကုန်ကြတယ်မလား?? မငြိမ်နိုင်တဲ့ကောင်က ဝင်ပြောတယ် မင်းတို့ကို ပြန်မေးတယ်တဲ့... ရှက်တက်ရင်လဲသေဖို့ ကောင်းတယ်... ဘာမှ သုံးစားမရဘူး
မေးနေလဲဘာမှ အဖြေရှိမှာမဟုတ်ဘူး..စတည်းကဟုတ်မှမဟုတ်တာ...စောက်ရူးတွေချည်းပဲလေ...ဟိုလူ့ဆီကပေးစာကမ်းစာရနိုးဒီလူ့ဆီကပေးစာကမ်းစာရနိုးနဲ့လျှောက်အော်နေတာ....သူတောင်းစား ဒီမိုတွေ...
ဒီမေးခွန်းတွေတော်တော်ကောင်းပါတယ် ဘယ်သူ ကောင်းမွန်စွာပြန်ဖြေပေးမလဲ ဘယ်ဆိုဒ်မှာ ဖြေထားလဲသိရင် လင့်လေးဝေမျှပေးကြပါ.
မေးခွန်းများ၏ အဖြေ:၁ ။ ရှေ့မရောက်လို့ အမျိုးအမျိုးအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး လုပ်သမျှကို ဘုကန့်လန့်လုပ်နေမှာ ထောက်ပံ့ကြေးရမှာလေ။ နောက်ကိုပဲ ပြန်သွားဖို့ စဉ်းစားတာ ဆိုတာကလည်း ရှင်းပါတယ် တော်လှန်ရေးကြီးအဓွန့်ရှည်မှကို ထောက်ပံ့ကြေးတွေ အကြာကြီးရမှာပေါ့။၂။ နိုင်ငံရေးက လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တာဟုတ်ပါတယ် အသက် ၄၂ ကျော်မှာ နိုင်ငံရေးစလုပ်တယ်ဆိုတာက အဲဒီအရွယ်က သွေးဆုံးနေပြီလေ ဟီး...။ တဏှာထလို့မှ မကောင်းတော့တာ အဲဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးလုပ်တာ အဆင်သင့်လိုက်ပုံက မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။၃။ ဂျွန်ယက်တောနဲ့ တစ်ညလုံးနေခဲ့တယ်ဆိုတာက မပြောတော့ပါဘူးကွယ် အဲဒီမေးခွန်းကို မဖြေပါရစေနဲ့ အကန့်လေးတွေ ရှိနေလို့ပါ။၄။ အကျယ်ချူပ်က လွတ်ရင် တွစ်တာ သုံးမယ်ဆိုတာကတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး လွတ်လာရင် ဘာမှလည်း လုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ လူအထင်ကြီးအောင် တစ်ခုခုပြောမှဆိုပြီး တွစ်တာ သုံးမယ်လုိ့ ပြောလိုက်တာပါ။ အဲဒါတောင် အကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခံရသေးတယ်လေ ဖေ့ဘွတ်ပဲ မြန်မာတွေ အများစုက သုံးနေကြတာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ အရှက်ကွဲသွားတာပေ့ါ။၅။ ပြည်သူ့အသံကိုပဲ ကြားချင်တာပါ အထူးသဖြင့် ဘုန်းတော်ဘွဲ့ဖွဲ့တဲ့ အသံတွေပါ။ ငါးမင်းဆွေက ပြည်သားလေ ပြည်သူမှ မဟုတ်တာ ခွိခွိ။၆။ သြော် အမေရိကန်နဲ့ မြေမြှပ်မိုင်းကိစ္စကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ အမေရိကန်ကို ဖားထားမှ အဆင်ပြေမှာပေါ့ အဲဒါမှ နောက်ထပ်ဆုတွေ တစ်သီကြီး ရမှာလေ အခုက ဘုမသိဘမသိနဲ့ ရခဲ့တဲ့ဆုပေါင်း ၈၀ ကျော်ပဲရှိသေးတယ် မသေခင်လေး ဆုပေါင်း ၁၀၀ ကျော်လောက်တော့ ရသွားချင်တာပေါ့ကွယ်။၇။ အင်န်အယ်ဒီက ဘာလို့ အခုမှ ရည်တည်ခွင့်ရဖို့ ပြန်ကြိုးစားနေတာလဲဆိုတော့ လုပ်စရာက အဲဒါပဲရှိတယ်လေ ဘာမှမလုပ်ရင် ပြည်သူက အထင်သေးတော့မယ် ဒီအတိုင်းပဲ ဟိုစုရုံးဒီစုရုံးလုပ်တာကလွဲပြီး ဘာမှ လုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။၈။ သြော် ဒါကတော့ ပါတီဥက္ကဌဆိုတာ ဘာမှမှမဟုတ်တာကို မမစု အမိန့်ကို မလွန်ဆန်ချင်ပါဘူး။ သူ့နောက်မှာ အင်အားတွေများတယ်လေ အမေရိကန်တို့ ပြင်သစ်တို့လိုပေါ့။ကျန်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုနောက်မှ ဖြေတော့မယ်လေ။
မေးခွန်းများ၏ အဖြေ:၁ ။ ရှေ့မရောက်လို့ အမျိုးအမျိုးအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး လုပ်သမျှကို ဘုကန့်လန့်လုပ်နေမှာ ထောက်ပံ့ကြေးရမှာလေ။ နောက်ကိုပဲ ပြန်သွားဖို့ စဉ်းစားတာ ဆိုတာကလည်း ရှင်းပါတယ် တော်လှန်ရေးကြီးအဓွန့်ရှည်မှကို ထောက်ပံ့ကြေးတွေ အကြာကြီးရမှာပေါ့။၂။ နိုင်ငံရေးက လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တာဟုတ်ပါတယ် အသက် ၄၂ ကျော်မှာ နိုင်ငံရေးစလုပ်တယ်ဆိုတာက အဲဒီအရွယ်က သွေးဆုံးနေပြီလေ ဟီး...။ တဏှာထလို့မှ မကောင်းတော့တာ အဲဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးလုပ်တာ အဆင်သင့်လိုက်ပုံက မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။၃။ ဂျွန်ယက်တောနဲ့ တစ်ညလုံးနေခဲ့တယ်ဆိုတာက မပြောတော့ပါဘူးကွယ် အဲဒီမေးခွန်းကို မဖြေပါရစေနဲ့ အကန့်လေးတွေ ရှိနေလို့ပါ။၄။ အကျယ်ချူပ်က လွတ်ရင် တွစ်တာ သုံးမယ်ဆိုတာကတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး လွတ်လာရင် ဘာမှလည်း လုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ လူအထင်ကြီးအောင် တစ်ခုခုပြောမှဆိုပြီး တွစ်တာ သုံးမယ်လုိ့ ပြောလိုက်တာပါ။ အဲဒါတောင် အကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခံရသေးတယ်လေ ဖေ့ဘွတ်ပဲ မြန်မာတွေ အများစုက သုံးနေကြတာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ အရှက်ကွဲသွားတာပေ့ါ။၅။ ပြည်သူ့အသံကိုပဲ ကြားချင်တာပါ အထူးသဖြင့် ဘုန်းတော်ဘွဲ့ဖွဲ့တဲ့ အသံတွေပါ။ ငါးမင်းဆွေက ပြည်သားလေ ပြည်သူမှ မဟုတ်တာ ခွိခွိ။၆။ သြော် အမေရိကန်နဲ့ မြေမြှပ်မိုင်းကိစ္စကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ အမေရိကန်ကို ဖားထားမှ အဆင်ပြေမှာပေါ့ အဲဒါမှ နောက်ထပ်ဆုတွေ တစ်သီကြီး ရမှာလေ အခုက ဘုမသိဘမသိနဲ့ ရခဲ့တဲ့ဆုပေါင်း ၈၀ ကျော်ပဲရှိသေးတယ် မသေခင်လေး ဆုပေါင်း ၁၀၀ ကျော်လောက်တော့ ရသွားချင်တာပေါ့ကွယ်။၇။ အင်န်အယ်ဒီက ဘာလို့ အခုမှ ရည်တည်ခွင့်ရဖို့ ပြန်ကြိုးစားနေတာလဲဆိုတော့ လုပ်စရာက အဲဒါပဲရှိတယ်လေ ဘာမှမလုပ်ရင် ပြည်သူက အထင်သေးတော့မယ် ဒီအတိုင်းပဲ ဟိုစုရုံးဒီစုရုံးလုပ်တာကလွဲပြီး ဘာမှ လုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။၈။ သြော် ဒါကတော့ ပါတီဥက္ကဌဆိုတာ ဘာမှမှမဟုတ်တာကို မမစု အမိန့်ကို မလွန်ဆန်ချင်ပါဘူး။ သူ့နောက်မှာ အင်အားတွေများတယ်လေ အမေရိကန်တို့ ပြင်သစ်တို့လိုပေါ့။ကျန်တဲ့မေးခွန်းတွေကို နောက်မှဖြေတော့မယ်လေ။
ဘယ်ကကောင်လဲကွ ... သူတောင်းစား ဒေါ်လာစား ... မင်းသတ္တိရှိရင် မင်းနာမည်နဲ့ နေရပ်လိပ်စာပြောလေ ... မင်းမပြောရဲဘူးမဟုတ်လား ... စောက်အခြောက် ... မင်းပထွေးဆီမှာပဲ ဖင်သွားကုန်းနေလိုက်တော့ ... နာမည်ပြောဖို့တော့ ကြောက်တယ် ... သွေးမရှိရင် လျှောက်မရေးနဲ့ ...
ကျွန်တော့် နာမည်ဒေါ်လာစားပါ ... သန်းရွှေးမြေးဆီမှာ ဖင်သွားကုန်းကုန်းပေးရင် ကျွန်တော့်ကို ဒေါ်လာပေးပါတယ် ... အဲဒါမို့ ကျွန်တော့်နာမည် ဒေါ်လာစားလို့ ပေးထားပါတယ် ... အခုလို စာတွေလိုက်ရေးပြီး ဒီမိုကရေစီအတွက် ကြိုးပမ်းနေတဲ့လူတွေကို တိုက်ခိုက်နေရတာကလည်း ကျွန်တော် အခြိမ်းခြောက်ခံနေရလို့ပါ ... သူတို့က ကျွန်တော့်ကို ဒီလိုစာတွေမရေးရင် သန်းရွှေမြေးဆီမှာ ဖင်နေ့တိုင်း သွားကုန်းရမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ထားလို့ပါ ... အနော့ကို သနားကြပါနော် ...
comment ပေးတဲ့ လူအားလုံကို တစ်ယောက်ထဲလို့ ပြောရ အောင် မင်းက comment ပေးတဲ့လူကို ဖင်ကုန်းလို့ သိတာလား။Sever တူရင် အိုင်ပီတူတယ်။အခုဟာ comment ပေးတဲ့လူ အားလုံး sever လည်း မတူပါဘူး။တကယ်တမ်းက မင်းတို့ ဘလော့တွေကမှ ကိုယ်ဘာသာ ကို ပြော ကိုယ်ဘာသာ ကို ထောက်ခံလုပ်နေတာ။ငါတို့ သွားရေး ရင် ငါတို့ IP ကို ဘမ်းတယ်။မင်းတို့ အချင်းချင်းပဲ ထောက်ခံ မင်းတို့ အချင်းချင်းပဲ အတည်ပြုနေတာ။အခု ဒီဘလော့က ကြိုက်တဲ့ လူ ကြိုက် တဲ့ comment ကို ရေးလို့ရတယ်။မင်းစောက်ရှက် မရှိလို့ အဲလို ပြောတာ။မင်းက ဒေါ်စုကို စော်ကားတော့ ကိုယ်မေ အရွယ်လောက်တဲ့။မင်းတို့ကျတော့ ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး ကတော်ကို စော်ကားတာကျတော့ ငရဲ မကြီးဘူးလား။မင်းတို့ ဒေါ်စု စော်ကားနေတာ မဟုတ်ဘူး တကယ်တော့ sexy မကြီး။အခု မှ အသက်ကြီးသွားလို့။ဒါတောင် သူက ကဲချင်နေသေးတာ။
9 December 2010 20:54
တကယ်တမ်း ကိုယ်ဘာသာ ဖဲဝေပီး ကိုယ်ဘာသာ ကလဘန်ထိုးနေတာ အဲဒီ ဒီမိုဘန်းပြနိုင်ငံရေး သမား ဒေါ်လာစား ပဆိန်ရိုး sexyမကြီး ဒေါ်စုရဲ့ သားသမီးများ ဘိထောင် ခေါင်းဖြစ်ရေး ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ဧရာဝတီ။ဆုံဆည်းရာနှင့်အခြား ဒေါ်လာစာ ဘလော့တွေပါ။သူတို့ ကို တိုက်ခိုက်(သို့)ဝေဖန်တဲ့ စာသွားရေးရင် ဘန်းပါတယ်။သူတို့ အချင်းချင်းတွေပဲ ရေးကြ ထောက်ခံကြ လုပ်နေတာပါ။ဒေါ်စုကို အဲလိုပြောတော့ ကိုယ်အမေရွယ်လောက်တဲ့။ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ဆိုရင် သူ့တို့ အဘိုးအာဘွားလောက်ရှိတာကို မိုက်မိုက်ရှိုင်းပြောတာ ကြတော့ ဘယ်လိုငရဲမှာ ကျမလည်း စောင့်ကြည့်ရသေးတာပေါ့
10 December 2010 06:34
(Anonymous said....... ခွေးမသား မင်းပထွေးသန်းရွှေဆီမှာပဲ ဖင်သွားကုန်းနေလိုက်တော့ ...ကိုယ့်အမေအရွယ်လူကို စော်ကားမော်ကားလုပ်နေတာ မင်းမြေမြိုခံရလိမ့်မယ် )ဒီ ပို့စ်ကို ရေးတဲ့ သူငယ်ချင်းရေ ကျွန်တော် တစ်ခုလောက် ပြောချင်ပါတယ် စာကိုဆုံးအောင် ဖတ်စေချင်တယ်။ ကိုယ့်အမေအရွယ်လို့ သုံးပြီးမြေမြိုမယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းက အမေချစ်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဆိုရင် သူတစ်ပါးအမေကိုလည်း မထိခိုက်စေနဲ့လေ ပြီးတော့ အဖိုးအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ သူကိုလည်း သူငယ်ချင်း ဆဲနေတာက ငရဲမကျနိုင်ဘူးလား ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ထက် အသက်အရွယ် ကြီးပြီးဆိုရင် မည်သူ့ကိုမဆို ရိုသေရပါတယ် လောကနီတိမှာလည်း ဒီလိုပဲ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူမို့ ရိုသေမယ် မကြိုက်တဲ့သူကို ဆဲရမယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မြတ်စွာဘုရားက မဟောထားပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြတ်ဗုဒ္ဓက မကောင်းတဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခွဲခြားပြီးဆက်ဆံတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စကားပုံတောင် ရှိပါတယ် ကြီးသူကိုရိုသေ၊ ရွယ်တူကိုလေးစား၊ ငယ်သူကို သနားဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောနေတာက ဘယ်သူ့ဘက်မှ လိုက်ပြီးပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး လူတစ်ယောက်က ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားဟာ သူတစ်ပါးကို ပြောချင်စိတ်နဲ့ပဲ ပြောလိုက်ပေမယ့် ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားက တစ်ဖက်သက် မဆန်ပဲ အမှားအယွင်းမရှိစေပဲ ပြောတတ်ဖို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ လူအချင်းချင်းလည်း ရိုင်းပင်းတတ်တယ် ကြီးသူကိုလည်း ရိုသေတတ်တယ်။ ပြီးတော့ မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ သတ္တဝါအားလုံးကို ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့အောင် အမှားတွေ အများကြီးမလုပ်မိအောင် သွန်သင်ဆုံးမခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင် သူတစ်ပါးကို ပြစ်တင်ဝေဖန်နေမယ့် အစား ကိုယ်ရော ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ဘာတွေကောင်းအောင် လုပ်ပေးပြီးပြီလည်းဆိုတာကို သုံးသပ် ဆင်ခြင်ပြီးတော့ မလုပ်ရသေးရင် ကောင်းအောင်လုပ်ပါ။ အမြင်ကောင်းလေးတွေ ရှိပြီးတာ့ အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ အဲလိုတွေ ပြစ်တင်ဝေဖန် ဆဲရေးတိုင်းထွာနေမယ် ဒေါသတွေ ထွက်နေပြီးတော့ မာန်တွေထောင်နေကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိပ်စက်နေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ စိတ်ပင်ပန်းအောင်လုပ်နေတာနဲ့ တူပါတယ်။ ကာယကံရှင်များအတွက်တော့ ဘာအကျိုးမှ မရှိသလို ကျွန်တော်တို့တွေသာ ရန်များ ဒေါသတွေထွက်ရ စိတ်ပင်ပန်းတာပဲ အဖက်တင်ပါမယ်။ လူသားတိုင်း ယဉ်ကျေးလိမ္မာပြီးတာ့ အချင်းချင်း ရန်ဆောင်ခြင်းများ ကင်းဝေးကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။....သူငယ်ချင်းက ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ တရားတွေကို နားလည်သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွကိုလည်း သိမှာပါ။
အခုရေးတဲ့ comment ကတော့ အထူးသဖြင့် အပေါ်က Mr ကြီး ကိုဖြိုးကိုရည်ရွယ်ပါတယ် ... ကိုဖြိုးရေ ဒီ comment ကိုအာရုံစိုက်ပြီး ဆုံးတဲ့အထိဖတ်ခိုင်းစေချင်ပါတယ် ... နက်နဲတဲ့အတွေးအခေါ်တွေပါလို့ပါ ... ဆင်ခြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း သာ၍ညဏ်ရှိလာနိုင်ပါတယ် ... ကိုဖြိုးပြောတယ် ... ဟိုအပေါ်ကလူတစ်ယောက်က လူကြီးကို ဆဲပြီး comment ပေးထားတာမကောင်းဘူးတဲ့၊ လူကြီးကိုမဆဲသင့်ဘူးတဲ့၊ မှန်ပါတယ်၊ ဆဲတာမကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သူဘာကြောင့်ဆဲလဲ ကိုဖြိုးတွေးမိပါသလား၊ လူတိုင်းလိုလိုဟာ အကြောင်းမဲ့သက်သက် မဆဲတတ်ကြပါဘူး၊ သူတို့ခံစားရတာတွေများလာတဲ့အခါ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့တဲ့အခါ ဆဲတတ်ကြပါတယ်၊ ကိုဖြိုးရေးထားတဲ့စာထဲမှာတော့ ဆဲပြီးcommentပေးထားတဲ့လူကိုပဲ မကောင်းဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးနဲ့ ပြောထားပါတယ်၊ မဟုတ်တာတွေရေးထားတဲ့လူ သူတစ်ပါးကောင်းမှုလုပ်နေတာကို မကောင်းဘူးလို့ပြစ်တင်စော်ကားနေတဲ့လူတွေကိုကျတော့ ဘာလို့ဘာမှမပြောတာလဲ၊ ကိုဖြိုးပြောတယ် ဆဲပြီးcomment ပေးထားတဲ့လူကို ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူကို မဆဲနဲ့၊ သူဘယ်လိုပဲမကောင်းကောင်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မဆဲနဲ့လို့ရေးထားတာတွေ့မိပါတယ်၊ ဆဲတာမကောင်းပါဘူး၊ မှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဆဲတဲ့လူကို တစ်ကယ်တန်းမဆဲခိုင်းစေချင်ရင် သူတို့ကို မဆဲနဲ့လို့ပြောတာထက် သူတို့ဘာလို့ဆဲတာလဲဆိုတာကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်၊ သူတို့ဆဲရလောက်အောင် သူတို့ရင်ထဲမှာ ဘာတွေခံစားနေရလို့လဲ၊ ဆဲတဲ့ကိစ္စရပ်မှာ ဆဲတယ့်လူတစ်ယောက်တည်းမကောင်းဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူး၊ သူများကဆဲလာအောင် လုပ်တဲ့လူကိုလည်း အပြစ်ပြောသင့်ပါတယ်၊ ဆဲတဲ့လူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်း ထည့်တွက်သင့်ပါတယ်၊ အသက်ကြီးလို့မဆဲနဲ့ သွားပြောလို့ အဆင်မပြေလှပါဘူး၊ ဥပမာ ဘဘကြီးသန်းရွှေကို ဆဲနေကြတဲ့လူတွေတစ်ပုံကြီးပါ၊ ကိုဖြိုးအနေနဲ့ဆိုရင် ဘဘကြီးသန်းရွှေကို လူကြီးမို့လို့ ရိုရိုသေသေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ပါ့မလား၊ လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ ကိုဖြိုးပြောရင် ကိုဖြိုးနဲ့ ဘဘကြီးသန်းရွှေ ပြသာနာမတက်ဖူးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ တစ်ချို့လူတွေက ဘဘကြီးသန်းရွှေကို ရိုရိုသေသေနဲ့ မဆက်ဆံနိုင်ကြပါဘူး၊ သူတို့ကို ဘဘက လူကြီး အဲဒါမို့ ရိုရိုသေသေဆက်ဆံလို့ သွားပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး၊ သူတို့က ဦးသန်းရွှေရဲ့ ရက်စက်မှုဒဏ်တွေကို ခံခဲ့ရတာကိုး၊ ဥပမာ ကိုဖြိုးရဲ့ ကလေးတွေနဲ့မိန်းမကို ဦးသန်းရွှေက ရက်ရက်စက်စက်သတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ကိုဖြိုး ဦးသန်းရွှေကို လူကြီးမို့လိုဆိုပြီး ရိုရိုသေသေနဲ့ ဆက်ဆံနိုင်မှာလား၊ မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်၊ လူဆိုတာ ဆုံးရှံးဖူးမှ ခံစားတတ်လာပါတယ်၊ ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးမှ နားလည်တတ်လာကြပါတယ်၊ မဟုတ်ရင်တော့ တရားစကားအလှအပတွေကြားမှာပဲ ယစ်မူးပြီး လူတွေကို ဟိုလိုဒီလို လိုက်ပြောနေမှာပဲ၊ လောကကြီးက ကြမ်းတမ်းလှပါတယ်၊ ခက်ထန်လှပါတယ်၊ တစ်ချို့လူတွေ အရမ်းသနားဖို့ကောင်းပါတယ်၊ သူတို့ဆဲတာကိုမပြောပါနဲ့ သူတို့ဘယ်လိုခံခဲ့ရလည်းဆိုတာကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားပါဦး၊ ဒါတွေကို နားလည်လာတဲ့လူအဖို့ လူတွေကို ဘာမှသိပ်မပြောတော့ပါဘူး၊ လောကကြီးရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကို နားလည်လာပါတယ်၊ မင်းမဆဲနဲ့လို့တစ်ခုတည်းပြောလို့မရတော့ပါဘူး သူများဆဲလာအောင်မလုပ်နဲ့လို့လည်း ထည့်ပြောလာရမှာပါ၊ ပြီးတော့ မင်းမဆဲနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါ ကိုယ်သာဆိုသူ့နေရာ သူ့လိုမျိုး ခံခဲ့ရဖူးမယ်ဆိုရင် မဆဲဘဲနေနိုင်မှာလား၊ ဒါတွေကို ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်၊
11 December 2010 01:55
ကိုဖြိုးပြောတာလည်း မမှားပါဘူး ... တစ်ချို့ဟာတွေကျတော့ မှန်နေတယ်လို့ယူဆလို့မရပြန်ဘူး ... နက်နဲချက်တွေပါလာတယ်၊ ဥပမာ ကိုဖြိုးပြောတယ် ကြီးတဲ့လူဆိုရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုသေရမယ်၊ မမှားပါဘူး၊ သင့်လျော်လှပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အသက်ကြီးတိုင်းရိုသေရမှာလား၊ တစ်ခုမေးချင်ပါတယ် ဥပမာ အသက်ကြီးသူတစ်ယောက် ကိုဖြိုးမိဘနှစ်ပါးကို ရက်ရက်စက်စက် မီးရှို့သတ်ပြီး အစ်မနဲ့ညီမကို မုဒိန်းကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီလူကြီးကို ကိုဖြိုး ရိုသေနိုင်ပါ့မလား၊ သေချာစဉ်းစားပါ၊ စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးဖြေကြည့်ပါ၊ ကိုဖြိုးတစ်ကယ်ပဲ အဲဒီလူကြီးက အသက်ကြီးသူမို့ သူလုပ်ရပ်ကိုမကြည့်ဘဲ ရိုသေနိုင်ပါ့မလား၊ သူ့ကိုတွေ့ရင် အသက်ကြီးလို့ဆိုပြီး ကိုယ့်မိဘကိုသတ် အစ်မနဲ့ညီမကိုမုဒိန်းကျင့်ထားခဲ့တာတွေကို ဘေးဖယ်ထားပြီး ရိုရိုသေသေပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ပါ့မလား၊ဒါတွေဟာနက်နဲလှပါတယ်၊တရားစကားတွေက မှန်ကန်လှပါတယ်၊ဒါပေမဲ့ နက်နဲမှုလည်းရှိလှတယ်၊ညဏ်မမြင့်ရင် နားလည်ဖို့ ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့မလွယ်လှပါဘူး၊ ဗုဒ္ဓတရားဟောတယ် ကြီးတဲ့လူဆို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုသေရမယ်လို့ ကိုဖြိုးပြောထားပါတယ်၊ တစ်ခြားဘာသာတွေမပြောတော့ပါဘူး ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေမှာ ဥပဒေတွေရှိပါတယ်၊ ဥပဒေတွေရေးဆွဲတဲ့အခါ ဘာသာတရားတွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီးရေးဆွဲကြပါတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံပြီး ဆွဲကြပါတယ်၊ အခုပြောချင်တာက မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေမှာ အသက်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက် ဒုစရိုက်ကျူးလွန်ရင် အပြစ်မပေးဖို့ ပြောထားပါသလား၊ လူတစ်ယောက်မကောင်းမှုလုပ်ရင်လည်း အဲဒီလူအသက်ကြီးလို့ ရိုရိုသေသေဆက်ဆံရယ်၊ မရေးမယူရဘူး၊ အပြစ်မစီရင်ရဘူးလို့ ပြောပါသလား၊ အသက်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ဆိုးရွားတဲ့မကောင်းမှုလုပ်ခဲ့ရင် သေဒဏ်တောင်ပေးကြပါတယ်၊ ကိုဖြိုးရေ ဥပဒေက အသက်ကြီးလို့ရိုသေရမယ်နေနေသာသာ သေဒဏ်တောင်ပေးပါတယ်၊ သတ်ပစ်လိုက်တာပါပဲ၊ ဆဲတာနဲ့ သတ်ပစ်တာ ဘယ်ဟာပိုဆိုးပါသလဲ၊ ကိုဖြိုးသာဆိုရင် ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးပါမလဲ၊ ကိုဖြိုးပြောတယ်လေ ကြီးတဲ့သူဆိုရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရိုသေရမယ်တဲ့၊ ဒါပေမဲ့ တရားတဲ့ဥပဒေက အဲဒီလိုမပြောပါဘူး၊ ကြီးတဲ့လူတစ်ကယ်မကောင်းဘူးဆိုရင် ဆဲတာမပြောနဲ့ သတ်ပစ်ဖို့တောင်ပြောပါတယ်၊ အဲဒီဥပဒေကို မှားတယ်လို့ပြောနိုင်မှာလား၊ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ထိုဥပဒေကို ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးမှာပါလဲ၊ဗုဒ္ဓဘာသာလေးစားကိုးကွယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဟိုးရှေးဘုရင်တွေ ခေတ်အဆက်ဆက်ကတည်းက ဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်၊ မှားရင် အသက်ကြီးသူဖြစ်လည်း စီရင်ခံရမှာပဲ၊ ကိုဖြိုးပြောတဲ့ အသက်ကြီးသူဖြစ်လို့ဆိုပြီး ဒီအတိုင်းမထားပါဘူး၊ စီရင်ပါတယ်၊ သတ်တောင် သတ်ပစ်ပါတယ်၊ သတ်တောင်သတ်ပါတယ်ဆိုမှ မကောင်းတဲ့လူ အသက်ကြီးလို့ မဆဲနဲ့လို့ သွားပြောလို့မရပါဘူး၊ အသက်ကြီးတဲ့လူ မကောင်းမှုကြီးလုပ်ရင်လည်း ဆဲတာမပြောနဲ့ လိုအပ်ရင် သတ်တောင်သတ်ပစ်ဖို့ ပြောထားပါတယ်၊ ဒီဥပဒေတွေကလည်း ဘာသာတရားပေါ်မှာပဲ အခြေပြုပြီး ရေးဆွဲထားတာပါ၊ ဒါတွေကို စဉ်းစားပါ ကိုဖြိုး၊ ကိုဖြိုးပြောတဲ့ ကြီးသူကိုရိုသေ မမှားပါဘူး၊ ကျွန်တော်လည်းထောက်ခံပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကိုဖြိုးကို အဲဒီစကားရဲ့ နက်နဲချက်တွေကို နားလည်ခိုင်းစေချင်လို့ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုဖြိုးက ဟိုးအပေါ်က ဆဲပြီး comment ပေးထားတဲ့လူကို ပြောတယ်လေ ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်ကြီးသူကို ဆဲရင် မင်းလည်းငရဲကျမယ်တဲ့ ၊ ကိုဖြိုးရေ အဲဒီစကားအပြည့်အ၀မှန်တယ်လို့ထင်ပါသလား၊ အသက်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက် မကောင်းမှုကြီးကျူးလွန်လို့ တရားသူကြီးက သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ရင် အဲဒီတရားသူကြီး ငရဲကျသွားတော့မှာလား၊ ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ၊ နိုင်ငံတိုင်းမှာ စစ်သားတွေ စစ်တိုက်ကျရပါတယ်၊ စစ်တိုက်တဲ့အခါ ရန်သူတွေဟာ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးသူတွေလည်းပါပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ စစ်ပွဲမှာ တိုက်တဲ့အခါ အသက်ကြီးတဲ့လူလည်း သတ်မိတာပဲ၊ သတ်မိတာက ဆဲတာထက် အများကြီးပိုဆိုးပါတယ်၊ အဲဒီစစ်သားတွေက တစ်ကယ်ပဲ ငရဲသွားကျရမှာလား၊ နိုင်ငံတိုင်းက စစ်သားတွေ တစ်ကယ်ပဲ ရန်သူလူကြီးတွေကို သတ်မိတာ တစ်ကယ်ပဲအပြစ်ဖြစ်စေသလား၊ ကျွန်တော်အများကြီးပြောချင်ပါတယ်၊ အရမ်းရှည်သွားမှာစိုးလို့၊ တရားသဘောတွေရဲ့နက်နဲချက်တွေကို ပြောပြချင်တယ်၊ အများကြီးရှိသေးတယ်၊ အခုကိုဖြိုးကိုပြောတာက တစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်၊ ကိုဖြိုးရေ စဉ်းစားပါ၊ ကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်တယ်၊ အရာရာနားလည်လာတဲ့လူတစ်ယောက်က လူတွေကို ဘာမှမပြောတော့ပါဘူး ... လူတွေနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာတွေဆီပဲ ထွက်သွားကြပါတော့တယ်၊ ... ... ..
11 December 2010 06:43
သို့ ၀ိသာရအကိုပြောတယ် နော် ခံစားရတာ များလာတော့ လည်းမခံနိုင်ဘူး..ပေါ့..ဟုတ်ပါပြီ..ခံစားရတာများလာတော့...အပေါ်က လူကကော ခံစားရတာများလာတော့ ပြောမှာပဲလေ..သူလည်းသူခံစားချက်နဲ့ သူ..ဒါကို ကိုဖြိုးက ကြားကနေ ပြောတယ်..ဘယ်သူတရားပြတ်ပြတ်မပျက်စေချင်လို့..အပေါ်က လူပြောတာ ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောသွားတာ..အောက်က လူနဲ့ သွေးမတော်ပါဘူး..သားလည်း မဆပ်လောက်ပါဘူး..အောက်က လူဆဲသွားတာက မွေးသမိခင်ကိုဆဲသွားတာ ..အဲလောက်ဆိုရလောက်ပါပြီ..ဆက်ပြောဖို့မလိုလောက်ပါဘူး..ဟုတ်ပါပြီ...နောက် ကျွန်တော် တို့ ပြောချင်တာ က အပေါ်က မေးခွန်းတွေဖြေဖို့ကိုပဲပြောချင်တာ ခင်ဗျားပြောသွားတာက အောက်က ကွန်မင့်ပေးတဲ့သူကို အတင်းမဲနေတာ..ဒါတွေက ခင်ဗျားတို့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ...ဖြေကြည့် ပါ.. တစ်ခုတော့ပြောမယ်နော်..သူများ က ကိုယ့်ကို အကောင်းမြင့် ဖို့ထက် မိမိကိုယ်ကိုယ်ကောင်းအောင် မြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ..( ကျွန်တော် ပြောတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က နည်းနည်းတော့ပြောင်းပြန်ဆန်နေတယ်.. ခင်ဗျားတို့ လောကမှာတော့ ဒါက မှ ကွက်တိပဲ..ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ ခင်ဗျားတို့ သာအသိဆုံး.. အမေစုတွင်တွင်အော်..ဒီမိုကရေစီ စာအုပ်ကြီးတွေတွင်တွင်ဖတ်..နောက် ဆုံးခင်ဗျားတို့ လုပ်နေတာ က ဘာတွေပဲလုပ်လုပ် တိုင်းပြည်သိက္ခာနဲ့ လဲစားနေတာ တွေကြီးပဲ..ကျွန်တော် ပြောမယ်ဗျာ..မြန်မာ ပြည်မြန်မာလူမျိုးသိက္ခာကျအောင် ဘယ်သူလုပ်လေ့ရှိလည်း ခင်ဗျားတို့ သာအသိဆုံး.နောက် မြန်မာ လူမျိုးတွေငတ်နေပါပြီ တွင်တွင်အော်ပြီး အနောက်အုပ်စု သဘောကျအောင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မူကို အတင်းထောက်ခံနေတာ ခင်ဗျားတို့ သာ အသိဆုံး.နေမှာပါ..တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ဒါက ကျွန်တော် အမြင် လေးပါ..မြန်မာ ပြည်မြန်မာ လူမျိုး ကမ္ဘာပျက်တောင် မငတ်ဘူးဗျ..သိလား မြန်မာ ပြည်မှာ နေကြိုက်တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားနေ နေစရာရှိတယ် ..ဆွမ်းကျန်စားရတယ်အနည်းဆုံးတော့ဟုတ်လား..ဒါက ခင်ဗျားတို့ တွင်တွင်သုံးနေတဲ့ စကားကိုပြန်ချေကြည့်တာပါ..ကိုယ်နဲ့ တန်ရာတန်ရာမှန်းတယ်တော့မပြောနဲ့ ဟုတ်လား ခင်ဗျားနေနေတာနဲ့ ကျုပ်နေနေတာ အကွာကြီး..) ( ဘော်ဘော် တို့ ရေ... ဒေါ်စု က twitterသုံးချင်တယ်ပြောတာ..သူကို sponsor ပေးမယ်ပြောထားလို့နေမှာ..twitter က..ဘာစပွန်ဆာလည်းဆိုတာတော့ စောင့်မျှော်ကြည့်ပေါ့.)( အော် ပြောဖို့ကျန်သေးတယ်..တစ်ယောက်ထဲ ကပြောတယ်တော့ မလုပ်နဲ့ ကျွန်တော် ဘလော့ လင့်လေးပါ ချိတ်ပေးထားတယ်..ဟုတ်လား ဒါဆိုရင် တော့ တစ်ယောက်ထဲတော့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိပေါ့..)
Mg Paing Soe ရေ ... မင်းကို စကားအနည်းငယ်ပြောချင်ပါတယ်၊ အဲဒါတွေမပြောခင် တစ်ခုအရင်ပြောချင်တာက ဒီဆိုဒ်ကို ပြောထားတာနဲ့ လုပ်တာမညီဘူး ... ကိုပိုင်စိုးရေ မနေ့က ကျွန်တော် comment ပေးထားတာနှစ်ခုပါ၊ အခုတော့ တစ်ခုပဲကျန်တော့တာတွေ့ပါတယ်၊ ဒီဆိုဒ်မှာရေးထားတာတွေ့တယ် ဒီမိုကရေစီမြတ်နိုင်တဲ့ဆိုဒ်တွေမှာ လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးခွင့်မပေးဘူး၊ ဘန်းတယ်တို့ ဘာတို့ ဒါပေမဲ့ ဒီဆိုဒ်မှာတော့ လွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ရှိတယ်တဲ့၊ အခုတော့ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ comment ကိုဖျက်ထားတယ်၊ပထမတစ်ခုပဲ ချန်ထားတယ်၊ ကျွန်တော်အဖျက်ခံရတဲ့ comment ကစဉ်းစားစရာအချက်တွေပဲပြောထားတာပါ၊ ဆဲတာလည်း တစ်ခုမှမပါဘူး၊ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မတိုက်ခိုက်ထားဘူး၊ လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ စဉ်းစားစရာတွေကို ရေးထားတာပါ၊ အဲဒါ ဘာလို့ဖျက်လိုက်ရတာလဲ၊ ဒီဆိုဒ်ကပြောတော့ လွတ်လပ်တတယ်တဲ့ တစ်ခြားဒီမိုကရေစီဆိုဒ်တွေလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့၊ အခုတော့ အပြောနဲ့ အလုပ်လက်တွေ့မညီပါလား၊ ဒါပထမ comment ပါ၊ နောက်တစ်ခုထပ်ရေးပါမယ်၊
ကို Paing Soe ရေ ...ဒါကဒုတိယ comment ပါ၊ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကျွန်တော်က ပုဂ္ဂိုလ်စွဲရှိတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး၊ လူတစ်ယောက်ကောင်းရင် ကောင်းတယ်ပြောမယ်၊ မကောင်းတာလုပ်တာတွေ့ရင် မကောင်းဘူးပြောမယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် တစ်ကယ်မကောင်းရင် မကောင်းဘူးပြောမယ်၊ ကောင်းရင် ကောင်းတယ်ပြောမယ်၊ ဦးသန်းရွှေမကောင်းရင် မကောင်းဘူးပြောမယ်၊ သူတစ်ကယ်ကောင်းရင် ကောင်းကြောင်းဝန်ခံမယ့် လူမျိုးပါ၊ ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် နှစ်ယောက်ကို ယှဉ်လိုက်ရင် ဘယ်သူပိုကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ၊ လူတိုင်းက မပြည့်စုံပါဘူး၊ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာ အားနည်းချက်တွေနဲ့ပါ၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရင် ဘယ်သူက ပြည်သူတွေ အကျိုးပိုပြီးလုပ်ပေးနိုင်မယ်ထင်ပါသလဲ၊ ဘယ်သူက တိုင်းပြည်ကို ပိုငြိမ်းစေနိုင်မယ်ထင်ပါသလဲ၊ ကိုပိုင်စိုးညဏ်ရှိမယ်ဆိုရင် မြင်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်၊ ဦးသန်းရွှေက အာဏာနဲ့ပက်သက်လာရင် ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုန်းကြီးကိုတောင် သတ်ပစ်တဲ့လူပါ၊ ဘုန်းကြီးတောင် သတ်ပစ်ရင် သာမန်ပြည်သူဆို ပြောစရာမရှိပါဘူး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ဆိုရင် အာဏာနဲ့ပက်သက်လာရင် ဘုန်းကြီးတွေကို အဲဒီလိုလုပ်မယ်လို့ ကိုပိုင်စိုးထင်ပါသလား၊ တစ်ခြားလူတွေကိုလည်း လိုက်မေးကြည့်ပါ၊ သူတို့ရဲ့အဖြေတွေကို နားထောင်ကြည့်ပါ၊ ကျွန်တော်ကတော့ အများပြည်သူအကျိုး ပိုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် ဒေါ်အောင်းစုကြည်ကို ကောင်းတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်၊ သူ့မှာလည်း အားနည်းချက်တွေနဲ့ပါ၊ ဒါပေမဲ့ ဦးသန်းရွှေထက်စာရင် သူမြန်မာပြည်ကို ပိုငြိမ်းချမ်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် သူ့ကိုထောက်ခံရမှာပဲ၊ ဥပမာ ကိုပိုင်စိုးလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက် မြန်မာပြည်ကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လည်း ကိုပိုင်စိုးကို ထောက်ခံမှာ အသေအချာပါ၊ ကျွန်တော်က ပုဂ္ဂိုလ်စွဲရှိတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး၊ နိုင်ငံအတွက်တစ်ကယ်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင် အဲဒီလူကိုထောက်ခံမှာပါ၊ ဦးသန်းရွှေလည်း နိုင်ငံကို တစ်ကယ်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင် သူ့ကိုထောက်ခံမှာပါ၊ ကိုပိုင်စိုးရေ ဒီလောကမှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမရှိပါဘူး၊ အားနည်းချက်တွေရှိလို့ မထောက်ခံဘူးဆိုရင် ထောက်ခံစရာ တစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူး၊ ဒီမိုကရေစီတကယ်လုပ်နေတဲ့လူကို မထောက်ခံရင် ဦးသန်းရွှေကို သွယ်ဝိုက်ပြီးထောက်ခံနေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ၊ ဦးသန်းရွှေလုပ်ရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံက ပိုပြီးပျက်လာစရာပဲရှိပါတော့တယ်၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံပါတယ်၊ သူပြည့်စုံလို့မဟုတ်ပါဘူး၊ အခုလက်ရှိသူဟာ တစ်ခြားလူတွေထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်လို့ပါ၊ ကိုပိုင်စိုးလည်း နိုင်ငံကိုတစ်ကယ်ပိုကောင်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကိုပိုင်စိုးကိုလည်း ကျွန်တော်ထောက်ခံနေမှာပါ .... ..... ....
ကို Paing Soe ရေ ... ဒါ တတိယ comment ပါ၊ ... ကိုပိုင်စိုးပေးထားတဲ့အရာတစ်ချို့နဲ့ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော်အမြင်မရှင်းတဲ့ အရာတွေကိုပြောချင်လို့ပါ၊ ကိုပိုင်စိုး စီးပွားရေးဘာသာရပ်ကို သေသေချာချာလေ့လာဖူးပါသလား၊ ကိုပိုင်စိုးတင်မကပါဘူး တစ်ခြားလူတွေပြောနေကြတာ ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်၊ အဲဒါက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတဲ့၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ထောက်ခံတဲ့ ဒီမိုကရေစီကလူတွေက မကောင်းဘူးတဲ့၊ ကျွန်တော်တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေက အကြောင်းမဲ့ထောက်ခံတယ်လို့ထင်ပါသလား၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာကို ထောက်ခံလို့ သူတို့အတွက် တစ်ကယ်ပဲ အကျိုးအမြတ်ရတယ်လို့ထင်နေပါသလား၊ ကိုပိုင်စိုး စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးကို တစ်ကယ်နားလည်မယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာကို ထောက်ခံတဲ့လူတွေအပေါ် အပြစ်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ... စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာကို ဖွင့်ပေးလိုက်ရင် ပြည်သူတွေတစ်ကယ်ပဲ အကျိုးဖြစ်မယ်လို့ ကိုပိုင်စိုး အဲဒီလိုပဲနားလည်ပါသလား၊ အဲဒီလိုပဲ နားလည်တယ်ဆိုရင် မှားတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ဖွင့်ပေးလိုက်ရင် တစ်ကယ်တန်းအကျိုးရှိမှာက ပြည်သူမဟုတ်ပါဘူး၊ စစ်အစိုးရပါ၊ အထူးသဖြင့် ဦးသန်းရွှေပါ၊ ဦးသန်းရွှေက နိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှု အများဆုံးခိုးယူသိမ်းပိုက်ထားသူပါ၊ စီးပွားရေးဖွင့်လို့ကတော့ နိုင်ငံတော်သယံဇာတတွေ အကုန်ပြုတ်သွားနိုင်ပါတယ်၊ အခုတောင် နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ သစ်၊ကျောက်မြတ်၊ရေနံဓါတ်ငွေ့ စတာတွေကို စိတ်ကြိုက်ခြယ်လှယ်နေသူတွေပါ၊ တော်တော်ကုန်သွားနေပါပြီ၊ အဲဒီအရာတွေရဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ဥစ္စာ ပြည်သူတွေ မခံစားရဘဲ သူတို့တွေရဲ့အိတ်ထဲဘဲ ရောက်သွားနေပါတယ်၊ အဲဒါတွေကို ကိုပိုင်စိုးဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ၊ မြန်မာပြည်မှာဆင်းရဲပြီးငတ်ပြတ်နေတဲ့လူတွေတစ်ပုံကြီးပါ၊ စစ်အစိုးရက ဘာလို့ မကူညီတာလဲ၊ ကိုပိုင်စိုးလည်း ငတ်ပြတ်နေတဲ့လူထဲမှာပါခဲ့မယ်ဆိုရင် အခု ကိုယ်ကျိုးအတွက်ပဲကြည့်နေတဲ့ စစ်အစိုးရကို ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးမှာလဲ၊ သဘောထားကြီးစွာနဲ့ပဲ စစ်အစိုးရကို နိုင်ငံတော်ဟာတွေကို သူလိုချင်လို့သူယူတာ ယူပါစေ၊ သူပဲချမ်းသာရင် ချမ်းသာပါစေ၊ ငါတို့ငတ်သေလည်း ကိစ္စမရှိဘူးလို့ပြောမှာလား ... ... ... ကိုပိုင်စိုးရေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကို အဓိက ချုပ်ကိုင်တာက စစ်အစိုးရပါ ... တကယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာလည်း စစ်အစိုးရကိုပဲ မီပြီး လုပ်နေကြရတာပါ၊ သူလုပ်ခွင့်ပေးမှ လုပ်ကြရတာပါ၊ ဘောင်ကျော်ပြီးလုပ်ခွင့်မရကြပါဘူး .. အနောက်ကနေ စစ်အစိုးရက ကြိုးကိုင်နေတာပါ၊ အဲဒါစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ သွားဖွင့်ပေးလိုက်ရင် ပြည်သူတွေကောင်းစားမယ်လို့ ထင်ပါသလား၊ ဒါအကြမ်းပြောထားတာပါ၊ နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကို တစ်ကယ်နားလည်းတဲ့လူတွေဆို ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါတယ်၊ မြန်မာပြည်မှာ gas ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရပါတယ်၊ အဲဒီငွေတွေစစ်အစိုးရလက်ထဲပဲရောက်နေတာပါ၊ တစ်ကယ်ဆိုရင် အဲဒီငွေတွေနဲ့ပြည်သူတွေအကျိုးအများကြီးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့မလုပ်ဘူးလေ၊ gas ရောင်းရတာမနည်းလှပါဘူး၊ ဒါတောင်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတာပါ၊ စီးပွားရေးသာဖွင့်ပေးလိုက်လို့ကတော့ ရှိရှိသမျှရောင်းစားမယ့် စစ်အစိုးရပါ ... ... ... အဲဒါမို့ ကိုပိုင်စိုးကိုပြောချင်ပါတယ်၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာကို ထောက်ခံတဲ့လူတွေက အကြောင်းမဲ့ထောက်ခံနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ပြည်သူတွေတစ်ကယ်အကျိုးမဖြစ်ဘဲ နိုင်ငံတော်ဟာတွေကုန်ပြီး စစ်အစိုးရပဲပိုချမ်းသာလာမှာကို စိုးရိမ်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ကိုပိုင်စိုးတစ်ယောက် စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအကြောင်း ပိုလေ့လာ ပိုနားလည်နိုင်ပါစေ ... ...
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ comment တွေဖျက်တာများလာပြီနော် ... အမှန်ပြောတာတွေကို ဘာလို့လက်မခံနိုင်တာလဲ .. ဆဲတာတစ်ခုမှမပါဘူး .. ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မတိုက်ခိုက်ဘူး ... အဲဒါဘာလို့ဖျက်လည်း ... ကျွန်တော်ပြောတာ လက်မခံဘူးဆိုရင် အေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြောပေါ့ .. အခုတော့ ဖျက်တယ်တဲ့ဗျာ ... ပြောတော့ တစ်ခြားဆိုဒ်တွေလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ .. လွတ်လပ်တယ်တဲ့ .. အခုတော့ အပြောနဲ့ အလုပ်မညီပါလား ...
ကိုပိုင်စိုးရေ ... အဲဒါပဲကြည့်တော့ ကိုပိုင်းစိုးအတွက်ဆိုပြီး ကျွန်တော် comment တွေရေးထားတာတွေ အဖျက်ခံရတယ်ဗျာ ... တစ်ချို့ဟာပဲကျန်တယ် ... ကျွန်တော်ရေးထားတာ ဆဲတာ တိုက်ခိုက်တာ တစ်ခုမှမပါဘူးနော် ... အဲဒါဖျက်တယ်တဲ့ဗျာ ... အဲဒါတွေအပေါ် ကိုပိုင်စိုးဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးမှာလဲ ...
ကိုပိုင်စိုးရေ ... ကျွန်တော်က ပုဂ္ဂိုလ်စွဲရှိတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး ... လူတစ်ယောက်တစ်ကယ်ကောင်းရင် ကောင်းကြောင်းထောက်ခံမှာပါ ... ဦးသန်းရွှေတစ်ကယ်ပဲ ပြည်သူတွေအတွက် ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင် ကျွန်တော်သူ့ကို ထောက်ခံမှာပါ၊ ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူကို ထောက်ခံတာ မှန်ကန်လှပါတယ်၊ အခုတော့ ကျွန်တော်မြင်တာက ဦးသန်းရွှေလည်း မပြည့်စုံပါဘူး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်လည်း အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် နိုင်ငံတော်ကို အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့ရင် ဘယ်သူက ပြည်သူတွေအကျိုးကို ပိုပြီးသယ်ပိုးနိုင်မယ်ထင်ပါသလဲ၊ ဦးသန်းရွှေ သူ့အာဏာနဲ့ပက်သက်လာရင် ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုတောင် သတ်ပစ်ဖို့ ၀န်မလေးသူပါ၊ တစ်ကယ်လည်း သတ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဘုန်းကြီးကိုတောင် သတ်ရင် ကျွန်တော်တို့သာမန်ပြည်သူတွေကိုဆိုရင်တော့ စာရင်းထဲတောင်မထည့်ပါဘူး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်သာ ဦးသန်းရွှေနေရာမှာသာဆိုရင် ဘုန်းကြီးတွေကို သတ်မယ်လို့ထင်ပါသလား ... ... ... ဒါတွေက စဉ်းစားစရာပါ ... ဦးသန်းရွှေကနိုင်ငံတော်ကို ဆက်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေအတွက်ရင်လေးစရာပါ ... ဒါကြောင့်မို့ ပြည်သူအများက ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ့် ခေါင်းဆောင်ကို တောင့်တကြတာပါ ... .... .... ကျွန်တော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံပါတယ် ... သူပြည့်စုံလို့မဟုတ်ပါဘူး ... သူ့မှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ ဘာလို့ထောက်ခံလို့လဲဆိုတော့ သူက ဦးသန်းေ၇ွှထက်သာပါတယ် ... လူသားချင်းစာနာတတ်ပါတယ် ... သူသာအုပ်ချုပ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေ ပိုပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းလာမှာမို့လိုပဲဖြစ်ပါတယ် ... ... ...
၀ိသာရ ပြောတာလုံးဝနည်းလမ်းကျ တယ် ဒါကြောင့်မို့ ပိုင်စိုးဆိုတဲ့ ကောင် ကွန်မန့်တွေဖျက်လိုက်တာဖြစ်မယ် စစ်အစိုးရရဲ့ စရိုက်တွေလေ
ဒီမို ဘလော့များကဲ့သို့ မဟုတ်ပါ။ ဘယ် comment မှ ဖျက်ရိုးထုံးစံ လုံးဝ လုံးဝ မရှိပါ....။ ကယောင်ခြောက်ခြား ပြောဆိုခြင်းများရှောင်ကျဉ်ပါ။ Comment တစ်ခုကို blog ပိုင်ရှင်က delete ပေးရင် This post has been removed byablog administrator. လို့ပေါ်ပြီး ကိုယ့် comment ကို ကိုယ့်ဘာကို delete ပေးရင် This post has been removed by the author.လို့ ပေါ်ပါတယ်။ blog မှာ comment ပေးချင်ရင် blog အကြောင်း နည်းနည်းပါးပါးသိအောင် လေ့လာပါ။ အင်္ဂလိပ်လို နဲနဲပါးပါး နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ။ မိန်းမစိတ်နဲ့ ရန်လိုမှုများကို ရှောင်ရှားပါ ပညာမဲ့ အစွန်းရောက် ဒီမို အပေါင်းတို့.....။
ဒီသူတောင်းစားတွေကတော့ ပြောမနေပါနဲ့တော့ကွာ ၊ စစ်အစိုးရက သူတို့ပထွေးတွေလေ ၊ စစ်အစိုးရရဲ့ အန်ဖတ်တွေစားပြီး ပျော်ပိုက်နေကြတဲ့လူတွေပေါ့ ၊ အလကားပါဗျာ ... သူတော်ကောင်းတွေကိုလည်း စော်ကားလို့စော်ကား ၊ ဒီကောင်တွေ သေရင်တော့ အပါယ်လားမှာ မလွဲပါဘူးဗျာ ....
စီပွားရေးပိတ်ဆိုတာ က အစိုးရကို ထိခိုက်အောင် အထူးသဖြင့် ဦးသန်းရွှေ ကို ထိခိုက်အောင်ပေါ့..ဟုတ်ပါပြီ..ဦး သန်းရွှေ ကြီးထိခိုက်လား မခိုက်လားဆိုတာတော့ ခင်ဗျားတို့ သာအသိဆုံးပဲ.သူတို့ လိုလူတွေ ဒေါ် လာသန်းချီ ထိခိုက်လို့ ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့်..ပြည်သူတွေ အတွက် အလုပ်ရုံတစ်ခု ဆုံးရှုံးရတာ မိသားစု သုံးလေးရာလောက် ငတ်သွားနိုင်တယ်နော်...ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့ ခင်ဗျားတွေးပေါ့..ကောင်းပြီ...ပိုင်စိုးဆိုတဲ့ကောင် ကွန့် မင့်တွေဖြတ်ပြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ ငတိ..ဖြတ်မဖြတ်ဆိုတာ တော့ ကျုပ်မသိပေမယ့်...ကျုပ် ကဘေး က၀င်ကွန်မင့်ပေးတဲ့ကောင်ဗျ.. အဲလိုတွေ ပြောတတ်လွန်းလို့ခင်ဗျားတို့ လိုကောင်တွေ ကျွန်ဘ၀ကကိုလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး..သူများတိုင်းပြည်မှာ ကျွန်ခံနေတဲ့ကောင်တွေ..
ကောင်းပြီ..ဦးသန်းရွှေကြီးအုပ်ချုပ်နေတာနဲ့ ဒေါ် စုအုပ်ချုပ်ရင် ဆိုတဲ့ နှစ်ခု ကိုယှဉ်ပြောခဲ့တယ်နော်..ကောင်းပြီ..ဒေါ်စုအုပ်ချုပ်ရင် ဆိုတာ က ခင်ဗျား စိတ်ကူးရင်နေတာကော ဖြစ်မနေဘူးလား ဒီလိုအချိန်မှာ..စိတ်ကူးရင်နေမယ့်အစား..ခင်ဗျားမှာ သာ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ရှိနေရင် ထလုပ်လိုက်ပါ့လား..ဘာတစ်ခု လုပ်ပြီးပြီလည်း..နောက် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်..ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုကျွန်တော် မကြိုက်ဘူးမဟုတ်ပါဘူး..ဗိုလ်ချုပ်သမီးပဲ.. နာမည်ကြားဘူးတာနဲ့ လေးစားမိပါတယ်..ဗိုလ်ချုပ် အရှိန်နဲ့..နောက် သူမမိတကွဲ ဖတကွဲနဲ့ တိုင်းပြည်အကြိုးအတွက် လုပ်နေတယ်..လေးစားပါတယ်..ဒါပေမယ့်..တကယ်တန်းတွေးကြည့်တော့ ဘာတွေ့နိုင်လည်း..ကျွန်တော် ပြောမယ်ဒေါ်စုနဲ့.. ဦးသန်းရွှေ ကိုထားလိုက် ဘေးမှာ သူတို့ နောက်က လိုက်နေတဲ့ သူတွေချင်းယှဉ်ကြစို့..ဒေါ်စုနောက် လိုက်နေတဲ့ သူတွေ ဒေါ်စုကိုအတင်းထောက်ခံနေတဲ့ သူတွေထဲမှာငါတို့ အာဏာရမှ ငါတို့ အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ သူတွေ ပုံနေသလားလို့..ဦးသန်းရွှေနောက်က လူတွေ တပ်မတော်သားတွေအကုန်လုံးသည် မြန်မာ နိုင်ငံရေး စီးကြောင်းမှာလည်း သူတို့ တတွေအုပ်ချုပ်နေသည် ဖြစ် မအုပ်ချုပ်ရသည်ဖြစ်စေ တိုင်းပြည်အရေးကိစ္စတိုင်းမှာ အသက်စွန့် ဖို့ ၀န်မလေးတတ်ကြတာ ခင်ဗျားတို့ အသိပဲ..ဒီလို လူတွေ က ခင်ဗျား ပြောတဲ့ လူတစ်ယောက် အင်အားထက် အစတရာ သာသွားပါပြီ..ခင်ဗျား နားလည်နိုင်ပါစေ..
ပိုင်စိုးရာ ... ကဲ တစ်ခုချင်ပါတယ် ... ပြည်သူတွေအခု ဆင်းရဲနေကြတယ်၊ အဲဒီလို အဓိက ဆင်းရဲနေတာက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံရလို့လား ဒါမှမဟုတ် စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေတွေကို ပြည်သူတွေ အပြည့်အ၀ အသုံးမချဘဲ များစွာအလွဲသုံးစားလုပ်ထားလို့ ပြည်သူတွေ ချမ်းသာနိုင်ပါရဲနဲ့ မချမ်းသာတာလား ...ကဲ မင်းပြောတဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုခံရလို့ မိသားစုတွေ ရာချီအလုပ်ပြုတ်သွားတာ ငါလက်ခံတယ်ကွ၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ အလုပ်ပြုတ်သွားလည်း အလုပ်ပြောင်းလုပ်လို့ရတယ်ကွ၊ အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့လူတွေ အလုပ်ထပ်ရှာလို့မရလို့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ငတ်သေသွားကြတယ်လို့ မင်းကြားမိလား ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ပြုတ်သွားတာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့ကွာ ၊ ဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့ကွာ၊ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေနဲ့ ပြန်ယှဉ်ကြည့်ပါ၊ အဲဒီနိုင်ငံခြားက လာထောင်တဲ့ ကုမ္ပဏီကအလုပ်သမားဦးရေက မြန်မာနိုင်ငံလူဦးအားလုံးနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် မဖြစ်စလောက်ပါ၊ အရမ်းနည်းတယ်ကွာ ..အဲ .. စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေတွေ အလွဲသုံးစားလုပ်လို့ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာက သန်းပေါင်းများစွာ ...ပိုင်စိုးရယ် .. မင်းအဲဒီလောက်ထိ မဒူလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် ... ဒီလောက်ရှင်းနေတာကိုကွာ ...စီးပွားေ၇းပိတ်ဆို့ခံရပေမယ့် အစိုးရက နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေတွေကို ပြည်သူတွေအတွက် အပြည့်အ၀ အသုံးချမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်ပါတယ်၊ နှစ်စဉ်နိုင်ငံတော် ၀င်ငွေတွေက နည်းတာမှ မဟုတ်တာကွာ ၊ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းထောင်ချီ ၀င်နေတဲ့ဟာကို ၊ အဲဒီလောက်များတဲ့ငွေတွေကို ပြည်သူတွေအတွက် အပြည့်အ၀ သုံးမယ်ဆိုရင် စိးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ခံနေရလည်း မှုစရာမလိုပါဘူး၊ ကောင်းကောင်းကြီးလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရက သုံးမှ မသုံးတာ၊ အလွဲသုံးစားလုပ်ထားတာကိုး ၊ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတာကို တကယ်ဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုရင် အဓိက ပြသာနာဖြစ်တဲ့ စစ်အစိုးရကိုပဲ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေတွေကို အပြည့်အ၀အသုံးချပေးဖို့ တောင်းဆိုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ မောင်ပိုင်စိုးရယ် ... မင်းလည်း လူညံ့မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် .. ငါတို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံသား အချင်းချင်းတွေပဲ ... ငါတို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မမြင်ဘူးကြပေမယ့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မုန်းစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး ... ငါတို့တွေအားလုံးက ပြည်သူပြည်သားတွေ ကောင်းစားဖို့ပဲ လုပ်ဆောင်ကြရမှာပါ ... အခုပြောတာတွေက ငါ့အမြင်တွေကို ပြောတာပါ ... မင်းပြောတဲ့ စိးပွားရေး ပိတ်ဆို့ခံရလို့ ပြည်သူတစ်ချို့ ဒုက္ခရောက်ကြတာ ငါလက်ခံပါတယ်၊ ... ငါပြောတဲ့ စစ်အစိုးရ နိုင်ငံတော် ၀င်ငွေတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်လို့ ပြည်သူ သန်းပေါင်းများစွာ ဒုက္ခ ရောက်နေတာတဲ့ အကြောင်းကိုကော ပြန်စဉ်းစားခိုင်းစေချင်ပါတယ် ...
17 December 2010 02:54
မောင်သက်ဦးတော်တော် အတွေးသိမ်တာ ပဲ..စီးပွားရေးပိတ်ဆို့လို့ မီသားစုသုံးလေးရာဆိုတာ မင်းတွေးကြည့်လိုက်...ငါပြောတာ နည်းနည်းလေးပဲပြောတာဟစက်ရုံတစ်ရုံစာလောက်ကိုပဲပြောတ..စက်ရုံ အလုပ်ရုံပေါင်းမြောက်များစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ မင်းသိလား..ဘယ်သိနိုင်မလည်း မင်းတို့မှာ မင်းတို့အတွေးတွေနဲ့ပဲလေ..ပြည်တွေစီးပွားကြပ်လေ..ဆူညံဆူညံဖြစ်လေ..မင်းတို့ကြိုက်လေ..ပဲမလား..မဖြစ်တော့တာလည်းတော်တော်ကြာပါပြီ..စီးပွားရေးဘန်းပြလို့မရတော့ ဘာသာရေးဘမ်းပြပြီးဆူခဲ့တာလည်း မဖြစ်စလောက်ကလေးပဲဖြစ်ခဲ့တော့..မင်းတို့ တတွေရှက်သင့်လောက်ပြီထင်တယ်..ဒေါ်လာသန်းချီဝင်တယ်..၀င်ပါတယ်..အကယ်ပြောတာ ငါတို့ နိုင်ငံသယံဇာတနဲ့..ဒါပေမယ့်ကွာ..ငါပြောမယ်နော်.ရေနံ..ငါတို့ နိုင်ငံထွက်ပါတယ်ရေနံတွေ..စံချိန်မိမိ ထုတ်နိုင်လား..?ဆန်တွေ..ထုတ်ပါတယ်..ပြည်ပ ကို...စံချိန်မှီလား..?နောက် အာလူးတွေ နှမ်းတွေ..တခြားကောက်ပဲသီးနံတွေ..ကုန်ချောအဖြစ်မပြောင်းနိုင်လို့ သူများနိုင်ငံကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ်တင်ပို့ပေးနေရတာမလား..အာလူးတွေထုတ်တယ်..သူများနိုင်ငံကို..ပြန်ဝင်လာတော့ အာလူးကြော်ထုတ်တွေ....ဈေးကြီးပေးပြီး ပြန်သွင်းနေရတယ်မလားးးဒါတွေပဲလေ မင်းတို့ ဒေါ်လာတွေဝင်လာတာပဲမြင်တာ..(ငါတို့မရလိုက်လေခြင်းဆိုတဲ့ သံဝေဂကြီးနဲ့မလား)ဒေါ်လာတွေ ပြန်ထွက်သွားတာကျတော့ မင်းတို့ မသိတော့ဘူး.. မင်းတို့ ပြောတယ်..ကုလားတွေ တရုတ်တွေမြန်မာ နိုင်ငံထဲမှာအရမ်းများနေပြီ.ကြာလာရင် မြန်မာ လူမျိုးတွေ ဒုက္ခရောက်မှာဆိုးတယ်မလား..ကုလားကောတရုတ်ကောက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေလေ..၀င်မှာပဲ..မ၀င်အောင် လုပ်ဖုိ့..ပြန်နင်ထုတ်နိုင်ဖို့က ကုလားကော တရုတ်ကော ထက် ငါတို့ တိုးတက်မှ ဖြစ်မှာပေါ့...ငါတို့ မတိုးတက်ပဲနဲ့တော့ ငါတို့ တတွေဘာလုပ်နိုင်ဦးမှာလည်း.မင်းတွေးလေ..ဒါပါပဲကွာ..တော်ပြီ..မင်းတို့နဲ့ပြောရတာ အချိန်ကုန်တယ်..ပြောလေ ဝေးလေပဲမင်းတို့ကောင်တွေက ..ငပိန်းတွေ..
ပိုင်စိုးရေ ... မင်းကတော့လေ ... သိသိကြီးနဲ့ ဘာတွေ လိုက်ပြောနေလဲမသိဘူး ... အခု မင်းကို မေးခွန်းနည်းနည်းပဲ မေးချင်တယ် ...၁၀ ခွန်းတည်းပါ၊ လျော့ပြီးမေးထားတာပါ၊ တစ်ခြားမေးခွန်းတွေ အများကြီးရှိသေးပါတယ်။၁။ မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဖွင့်လိုက်ရင် တစ်ကယ့်ကို အလုပ်အကိုင်တွေဖြစ်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလုပ်ကြနဲ့ ကုန်တွေလုပ်ထုတ်ကြနဲ့ အမှန်အကန်ကြီးပွားချမ်းသာမယ့်ပုံစံနဲ့ ... ပိုင်စိုးရေ မင်းအဲဒီလိုပဲ နားလည်နေသလား ... အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေပဲကြည့် ဥပမာ ထိုင်းနိုင်ငံ စီးပွားရေးအပိတ်မခံရပါဘူး၊ သူတို့ကကော အရမ်းချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေနိုင်လို့လား၊ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲ ရပ်တည်နိုင်ကြသေးတာပါ၊ သူတို့လည်း တစ်ကယ့်ချမ်းသာတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကို အမှီလိုက်နိုင်ဖို့ တစ်အားရုန်းနေရတာ၊ မင်းပြောသလို စီးပွားရေးဖွင့်ပေးခံရတိုင်း ချမ်းသာတိုးတက်နိုင်မယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးအပိတ်မခံရဘဲနဲ့ မချမ်းသာနိုင်သေးတဲ့ နိုင်ငံတွေကို မင်းဘယ်လိုပြောမလဲ၊ ဒါ မေးခွန်းနံပါတ် ၁ ပါ၊ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေ သယံဇာတပေါကြွယ်ဝပါတယ်၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုလည်း မခံရပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ မင်းပြောသလိုဘာလို့ မလုပ်နိုင်ကြသေးတာလဲ၊ မချမ်းသာနိုင်ကြသေးတာလဲ ...၂။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရင်တုန်းက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုမခံရပါဘူး၊ မင်းပြောတဲ့အတိုင်း စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုမခံရဘူးဆိုရင် အရမ်းအလုပ်ဖြစ်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလုပ်၊ စက်ရုံတွေထောင် ကုန်တွေထုတ်လုပ်နဲ့ ချမ်းသာတိုးတက်နေမယ်ဆိုရင် အဲဒီတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးပ်ိတ်ဆို့မှုမခံရဘဲနဲ့ ဘာလို့ ချမ်းသာတိုးတက်မှုတွေ မင်းပြောသလို ဘာလို့ မဖြစ်ခဲ့တာလဲ၊ ဒါမေးခွန်းနံပါတ် ၂ ပါ။၃။ ကမ္ဘာ့ကုလသမ္မဂက မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကို တိုင်းပြည်ရဲ့ ၀င်ငွေနဲ့ အဲဒီငွေတွေကို တိုင်းပြည်အတွက် အပြည့်အ၀ပြန်အသုံးချရဲ့လား မချဘူးလားဆိုတာ စာရင်းတင်ပြခိုင်းပါတယ်၊ နှစ်စဉ် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေနဲ့ နိုင်ငံတော်ကုန်ကျမှုစရိတ် ကိုက်ညီမှုရှိလား၊ မရှိဘူးလား၊ ၀င်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေမှာ ၀င်ငွေက ပိုများနေတဲ့အတွက် နှစ်စဉ်ငွေပိုတွေထွက်နေပါတယ်၊ အဲဒီငွေတွေကော ဘယ်မှာလဲ ဘယ်လောက်ရှိနေလဲ စသည်ဖြင့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင် စာရင်းတင်ခိုင်းတာ ဘာလို့ စစ်အစိုးရတင်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တာလဲ၊ ဘာလို့ မတင်ရဲခဲ့တာလဲ ၊ အကြောင်းရင်းအမှန်ကို ဖြေပါ ၊ ဒါမေးခွန်းနံပါတ် ၃ ပါ။၄။ နှစ်စဉ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၀င်ငွေဟာ မနည်းလှပါဘူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ခံနေရပေမဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေအများကြီးကို လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုရနေဆဲပါ၊ ဥပမာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရောင်းရငွေဟာ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ သန်းထောင်ချီ မြတ်နေပါတယ်၊ ဒါတစ်ခုတည်းပဲရှိပါသေးတယ်၊ တစ်ခြားကုန်ပစ္စည်းရောင်းရငွေတွေ အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် နည်းနည်းနောနောငွေတွေမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ပြန်သုံးတဲ့ငွေတွေဟာ ၀င်နေတဲ့ငွေပမာဏနဲ့စာရင် နည်းလှပါတယ်၊ အပြည့်အ၀အသုံးမချတဲ့အတွက် ငွေတွေ အများကြီးပိုနေပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီပိုငွေတွေဟာ နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေဆိုပြီး စာရင်းမထွက်လာပါဘူး၊ မေးခွန်းနံပါတ် ၄ ကတော့ အဲဒီပိုငွေတွေ ဘယ်ရောက်နေပါသလဲ ။၅။ အစိုးရက နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေတွေကို ပြည်သူတွေ အတွက် အပြည့်အ၀အသုံးချမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေအတွက် များစွာအကျိုးရှိလာနိုင်ပါတယ်၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ ခံနေရပေမယ့် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေတွေက အများကြီးပါ၊ အဲဒီငွေတွေနဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အရင်းအနှီးလုပ်ပြီး စက်ရုံတွေထောင်၊ ကုန်တွေထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်သူတွေ အလုပ်အကိုင်တွေ ရလာအောင် အများကြီးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်၊ နိုင်ငံခြားကလူတွေလာပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှတို့၊ စက်ရုံထောင်မှတို့မဟုတ်ပါဘူး၊ မေးခွန်းနံပါတ် ၅ က အစိုးရက အဲဒီလို စက်ရုံတွေထောင် အရင်းအနှီးတွေ ထုတ်ပေးပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ များစွာဖန်တီးပေးနိုင်ပေမယ့် ဘာလို့ မလုပ်တာပါလဲ ။
၆။ လူအချို့က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံနေရတာကိုပဲ ပြောနေကြတယ်၊ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့၊ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်တယ်နဲ့ ပြောနေကြတာ၊ တစ်ကယ်တန်း ပြည်သူတွေအတွက် ပူပန်နေရင် ... ပိုပြီးလက်တွေကျတဲ့လုပ်ရပ်ကတော့ ပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်တွေ၊ ကုန်ထုန်လုပ်နိုင်မှုတွေ၊ စက်ရုံတွေ အလုပ်ရုံတွေ ထူထောင်ပေးနိုင်ပါလျက်နဲ့ မလုပ်ဘဲနေနေတဲ့ အစိုးရကို ဘာလို့ လုပ်ပေးပါလို့ မတောင်းဆိုတာလဲ၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတဲ့နိုင်ငံကို ဖွင့်ပေးပါလို့ အော်ဟစ်နေမှာထက် ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရကို ပြည်သူတွေအတွက် လုပ်ပေးနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ မလုပ်ဘဲနေနေတာကို ဘာလို့ အပြစ်မပြောတာလဲ။ လက်တွေ့ကျတာကို ဘာလို့မလုပ်တာလဲ။ ဒါမေးခွန်း နံပါတ် ၆ ပါ။၇။ မြို့တော်တစ်ခုကို တည်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူလှတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ငွေကုန်ကြေးကျအရမ်း အရမ်းကို များပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် ပြည်သူတွေ အခက်အခဲတွေ့ချိန်၊ ဆင်းရဲနေချိန်မှာ ပြည်သူတွေကို မကူညီဘဲနဲ့ နေပြည်တော်မြို့ကို သွားတည်ပါတယ်၊ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ ကုန်ကျသွားပါတယ်၊ အဲဒီငွေတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်ကိုပဲ ရှယ်ဖြစ်အောင် သလို့ရပါတယ်၊ ပြည်သူတွေ အလုပ်အကိုင်တွေများစွာ ဖန်တီးပေးလို့ရပါတယ်၊ မေးခွန်းနံပါတ် ရ ကတော့ ပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ပါတယ်ပါးစပ်ကပြောပြီး အရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့ အဓိကဟာကို မကူညီဘဲနဲ့ မြို့သစ်သွားတည်တာ ဖြစ်သင့်ပါသလား ။ ၈။ မေးခွန်းနံပါတ် ၈ ၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံရလို့ ဆင်းရဲနေပါတယ်လို့ပြောပြောနေကြတဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးဟာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျခဲ့တဲ့ နေပြည်တော်မြို့သစ်ကြီးကိုကျတော့ တည်ထောင်နိုင်ခဲ့တာ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ။ ၉။ စစ်အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေအတွက်ပဲ လုပ်နေတာပါလို့ ပါးစပ်ကပြောပြီး ပြည်သူတွေအတွက် တစ်ကယ်လိုအပ်တဲ့ဟာကျတော့ မဖြည့်စွမ်းပေးတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ ။၁၀။ မေးခွန်းနံပါတ် ၁၀ ကတော့ အထက်က အကြောင်းအရာတွေကို တစ်ကယ်တန်း နားလည်ပြီး သိနေပါရဲ့သားနဲ့ ပေါ်တင်ကြီး ဘူးခံပြီး ငြင်းနေတဲ့ လူတစ်ချို့ရှိနေတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ကိုသက်ဦးရေ..နိုင်ငံ တခုကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ ဆိုတာ...လွယ်လားဗျာ..ခင်ဗျားတို့ ..ကျနော်တို့ မသိတဲ့ ..အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိအုံးမှာပါ...သေချာတာတခုကတော့..ဦးသန်းရွှေက..ခင်ဗျားထက်တော်လို့ နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်နေတာပဲ...ခင်ဗျားမေးတာတွေကလည်း..မှန်လားမှားလားဆိုတာကျနော်မသိဘူး..သေချာတာတခုကတော့..သူလုပ်တဲ့ အလုပ်တွေထဲမှာနိုင်ငံအတွက်ကောင်းရာကောင်းကြောင်းပဲပါပါတယ်..ဘယ်အကြီးအကဲမှ..ကို့နိုင်ငံကို..ပျက်စီးအောင်မလုပ်ပါဘူး..ခင်ဗျားသိထားရမှာ..ဦးသန်းရွှေ..တောထဲတောင်ထဲမှာ..ကျောပိုးအိတ်လွယ်ပီး..ပြည်သူတွေအေးအေးလူလူနေ၇ဖို့ အတွက်..စစ်တိုက်နေတဲ့ အချိန်မှာ..ခင်ဗျားတို့ အရမ်းကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်စု..ဘယ်နားမှာလည်း..မြန်မာပြည်မှာဆူပူမှုတွေဖြစ်နေတုန်း..ဒေါ်စု..စကားတခွန်းနဲ့..ဝင်ထိန်းခဲ့ လား..အဲချိန်မှာဘယ်သူဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာ..အားလုံးသိပါတယ်..အသီးကိုစားချင်ရင်..အပင်တော့စိုက်ရတယ်ဗျ..သူများစိုက်တဲ့ အပင်ကအသီးကိုစားချင်လို့ တော့မရဘူးလေ..ခင်ဗျားတို့ တွေက..နိုင်ငံတော်အတွက်..ရှေ့ တန်းမှာပေးဆပ်ခဲ့ ရတဲ့ ရဲဘော်တွေရဲ့ အသက်သွေးတွေကို..ဒေါ်စုရဲ့ ချွေးတစက်လောက်မှ..တန်းဖိုးမထားတတ်တာတော့ရင်နာတယ်..ဗျာ..ခင်ဗျားတို့ ဆီမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုးကွက်တွေကိုရှာမယ်..ပီးရင်အပြစ်ပြောဖို့ လောက်ချောင်းနေတာကို..အဲတော့..နိုင်ငံတော်ရဲ့ အကြီးအကဲကိုလည်းအပြစ်မြင်..စစ်တပ်ကိုလည်း..ပြစ်မြင်နေတာကိုး..စဉ်းစားပေါ့ဗျာ..
အပေါ်က ကို Anonymous ရေ ... ခင်ဗျားရဲ့ ကွန့်မန့်ထဲမှာ ပြောထားတယ် ... ဦးသန်းရွှေလုပ်တဲ့ အလုပ်တွေထဲမှာ နိုင်ငံအတွက် ကောင်းရာကောင်းကြောင်းပဲပါပါတယ်တဲ့ ... ဘယ်အကြီးအကဲမှ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပျက်စီးအောင်မလုပ်ပါဘူးတဲ့ ...ကျွန်တော် ဖတ်မိတော့ အတော်အံ့သြသွားတယ် ... စဉ်းစဉ်းစားစားလည်းလုပ်ပါဦး ... မရေးခင် သေချာပြန်စဉ်းစားပါဦး ... သူများတွေဖတ်ပြီး ရယ်နေမှာစိုးလို့ပါ ...ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က အစိုးရအမှုထမ်းဟောင်းအရာရှိတစ်ဦးပါ ... အခုလည်း အလျဉ်းသင့်သလို အထက်ကအမိန့်လာရင် အမှုထမ်းဆဲပါ ... ကျွန်တော်ဟာ အစိုးရရဲ့အတွင်းရေးပိုင်းမှာ အမှုထမ်းခဲ့ရတဲ့အတွက် အစိုးရအကြောင်းကို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသိထားသူပါ ... ကျွန်တော်ဟာ နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာရှိသူတစ်ဦးပါ ... အစိုးရအမှုထမ်းတုန်းကလည်း နိုင်ငံတော်ကိုသစ္စာရှိဖို့ နေ့စဉ်မနက်တိုင်း သစ္စာဆိုနေကြပါ ... အခုလည်း ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာရှိသလို နောက်လည်း သစ္စာရှိနေဦးမှာပါ ... ကျွန်တော့်စကားက ရှင်းပါတယ်၊ နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာရှိဖို့ပါ၊ နိုင်ငံတော်အကျိုးကိုသယ်ပိုးဖို့ပါ ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်က နိုင်ငံတော်ပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့သူတွေကို ချေမှုန်းဖို့ပါ ...တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ပါ ... နိုင်ငံတော်ဆိုတာ ပြည်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ် ... နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာရှိရမယ်လို့ပြောရင် ပြည်သူတွေအပေါ်သစ္စာရှိရမယ်လို့ ပြောတာနဲ့ အတူတူပါပဲ ... ကျွန်တော်အမှုထမ်းတုန်းက ဥပဒေရေးရာတွေ လေ့လာရပါတယ်... နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ဥပဒေနဲ့မညီရင်၊ နိုင်ငံတော်အကျိုးပျက်စီးအောင်လုပ်ရင် အပြစ်ဒဏ်ကျခံရမှာပါ ... ဥပဒေကတော့ အဲဒီလိုပဲပြောထားပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ အပြင်မှာတော့ နေရာတိုင်းမှာ ဥပဒေမစိုးမိုးပါဘူး ... ကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်ပါတယ် ...လာဘ်မစားတဲ့ ဗိုလ်မှုး၊ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်မှမရှိပါဘူး ... သူ့ဟာနဲ့သူ လာဘ်စားကြတာချည်းပါပဲ ... ပမာဏ အနည်းနဲ့ အများပဲ ကွာပါတယ် ... အဂတိလိုက်စားလို့ဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်အဖမ်းခံရပါတယ် ... အဲ တစ်ခြားလာဘ်စားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ အများကြီးရှိတာပဲ ... သူတို့ကျတော့ ဘာလို့ အဖမ်းမခံကြရတာလဲ ... စဉ်းစားစရာပါပဲ ... ဘာလို့ထင်ပါသလဲ ... အဲဒီထက် စဉ်းစားစရာက ဗိုလ်ချုပ်၊ ဗိုလ်မှူးတွေ အားလုံးလိုလိုလာဘ်စားကြပါတယ် ... ဘာလို့လာဘ်စားကြတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ ... တစ်ချို့ကတော့ လောဘကြီးလို့ပါ .. အဲ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဗိုလ်မှူးတွေထဲမှာ သီလရှိတဲ့လူတွေလည်း ရှိတာပဲ ... သူတို့လည်း လာဘ်စားကြရပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပထမ အကြောင်းရင်းက အစိုးရကပေးတဲ့ လစာက နည်းနည်းလေးပါ၊ မလောက်ပါဘူး၊ လာဘ်မစားရင် ငတ်မှာပါ၊ ဒါဟာ လာဘ်စားရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ချက်ပါ ... ဒီကနေ ဆက်စဉ်းစားရင် ဘာလို့ လစာနည်းနေတာလဲ၊ နိုင်ငံတော်က ဆင်းရဲပြီး တိုင်းပြည်ဝင်ငွေနည်းနေလို့လား ... သေချာပါတယ်၊ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေမနည်းပါဘူး၊ တိုင်းပြည်မဆင်းရဲပါဘူး ... ... ... ဆက်မပြောချင်တော့ပါဘူးဗျာ ... ... ဘယ်သူမပြု မိမိမှုလို့ပဲ မှတ်ချင်ပါတော့တယ် ... ကိုယ့်ထိုက်နဲ့ကိုယ့်ကံပါ ... ကျွန်တော်မှန်တာတစ်ခုပြောချင်ပါတယ် ... မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေဟာ စာရွက်ထဲမှာနဲ့ အာဏာရှိတဲ့လူရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာပဲရှိပါတယ် ... အစိုးရဲအဖွဲ့ထဲမှာလည်း ဥပဒေမစိုးမိုးပါဘူး၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သိပ်မကြည်ကြပါဘူး ... အရင်တုန်းကဆိုရင် မောင်အေးနဲ့ ခင်ညွန့်တို့ဟာ တစ်ကယ့်ရန်ဘက်တွေပါ၊ ပြိုင်ဘက်တွေပါ ... အခွင့်သာရင် သာသလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြုတ်ဖြုတ်ကြမယ့်လူတွေပါ ... အခုလူတွေလည်း အတူတူပါပဲ ... မပြောင်းလဲသေးပါဘူး ... ဟိုလူ ဒီလူ ဘာမဟုတ်တာလုပ်ထားလဲ သိနေကြပါတယ်၊ လစ်ရင်ဖော်ပြီး ဖြုတ်ချင်ကြသူတွေပါ ... သူ့ကိုအရင်မဖြုတ်ထားရင် ကိုယ့်အတွက်ပူကြရပါတယ် ... ဆက်မပြောတော့ပါဘူးဗျာ ... ကြားချင်ရင်တော့ ဆက်ပြောပေးပါ့မယ် ... ဖောပြီး လိမ်ပြီးလို့တော့ မပြောဘူး ... အရှိကို အရှိအတိုင်း ကြုံခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပြောပြမှာပါ ... သေချာတယ် ၊ ဗဟုသုတတော့ ရမှာပါ ၊ အဲ မကြားဖူခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလည်း ကြားရနိုင်ပါတယ်၊ ...
သက်ဦးရေ မင်း မျက်စိတွေ ဒေါ်လာတွေ ဖုံးနေတာလား ဒေါ်စုထမီဖုံးနေတာလားတော့ မသိတော့ဘူးကွာ..၁။(ထိုင်းနိုင်ငံ စီးပွားရေးအပိတ်မခံရပါဘူး၊ သူတို့ကကော အရမ်းချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေနိုင်လို့လား)သူတို့မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလဲရှိတော့ စက်ရုံတွေလဲရှိတယ်.. သက်ဦးမင်းမြန်မာကို မရောက်ဖူးဘူးထင်တယ်.. မြန်မာမှာ ဆိုင်ကယ်ထိုင်းဘီးဆို ဈေးဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာစုံစမ်းလိုက်ဦး နောက်ပြီး ဆိုင်ကယ်တင်လား ကွန်ပျူတာတွေပါ ထုတ်နေနိုင်ပြီဟ စုံစမ်းဦး... ကြားလား... နောက်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်ကွင်း၊ မင်းမြန်မာပြည်လာရင် ထိုင်းကတဆင့် လာခွင့်ရတာဆိုတာကိုလည်း သဘောပေါက်၊ပြောရင်ကုန်မှာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ. အဲဒါစီးပွားရေး၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေရဲ့ အကျိုးရလဒ်ပဲ.. နောက်ပြီး မင်းပြောနေတာတွေက စီးပွားရေးဖွင့်ပေးရင် နေ့ချင်းညချင်းကြီးကို ချမ်းသာမှဆိုသလိုကြီးပါလား... တဆင့်ချင်း လုပ်ယူသွားရမှာဆိုတာကို နားလည်သင့်တယ်..၂။ (မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရင်တုန်းက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု မခံရပါဘူး) ဘယ်တုန်းကလဲ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုက ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကစပြီး ပိတ်ခဲ့တာနော်.. အေး လက်ရှိအစိုးရ တက်ပြီး ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ပဲကြာသေးတာလဲ သဘောပေါက်လား အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာ ပြည်တွင်းစစ်ကိုလဲ ငြိမ်းရသေးတယ်၊ ပြည်တွင်းစစ် ငြိမ်းမှ တိုင်းပြည်သာယာမှ စီးပွားရေး၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေရှိလာမှာ ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်နော်..
၃။ (စာရင်းတင်ခိုင်းတာ ဘာလို့ စစ်အစိုးရတင်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တာလဲ၊) ဟရောင်စာရင်းတင်တယ်ဆိုတာ လွယ်လွယ်လေးဟ.. သူတို့သိတာမှတ်လို့ နောက်ပြီးမင်းက အစိုးရကိုများ အပေါင်းအနုတ်အမြောက်အစားကို မတတ်ဘူးများမှတ်နေလို့လား.. အေး အဓိက ကစစ်အသုံးစရိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေအတွက် မတင်တာလဲဖြစ်မှာပေါ့ကွ.. နောက်ပြီး မင်းတို့ကုလက မြန်မာအစိုးရကိုပဲပြောနေတာ အမေရိကန်ကိုရော မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရဲ့လား မှန်မှန်ကန်ကန် စာရင်းတင်ခိုင်းရဲ့လား.. လက်နက်ဆန်းတွေ မထုတ်လုပ်ဖို့ရော တားမြစ်ရဲရဲ့လား၎။ (တစ်ခြားနိုင်ငံတွေအများကြီးကို လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုရနေဆဲပါ) ဘယ်နှစ်နိုင်ငံလဲ ဈေးရောကောင်းကောင်းရရဲ့လား၊ ဒီဟာတွေကို ငါတို့မှမ၀ယ်ရင် စီးပွားရေးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ဈေးနိမ်မ၀ယ်ဘူးလို့ မင်းထင်သလား၊ နောက်ပြီး မင်းဟာ ၀င်ငွေတွေကိုပဲလိုက်ကြည့်နေတာကို တံတားဆောက်တယ် ဆည်တွေဆောက်တယ်.. ကျန်တဲ့နိုင်ငံတော်အတွက် ပစ္စည်းတွေဝယ်ရတယ်... လခစားတွေကိုလခ ပေးရတယ်.. စစ်အသုံးစရိတ်တွေရှိဦးမယ်.. ငါမသိမင်းမသိတဲ့ နိုင်ငံတော်အတွက် အသုံးစရိတ်တွေ အများကြီးရှိသေးတယ် ဆိုတာ သဘောပေါက်ထား၊ ပေါက်ကရ မန်ယူအသင်းဝယ်လိုက်လို့ ကုန်သွားပြီလို့ တခြားနိုင်ငံကဘဏ်တွေမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလောက် ၀ယ်လို့ရလောက်အောင် ရှိတယ်လို့ဆိုတာ ကလေးအတွေးတွေ... မိန်းမဥာဏ်တွေနဲ့ အပုပ်ချနေတာ၊
၅။ (အဲဒီငွေတွေနဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အရင်းအနှီးလုပ်ပြီး စက်ရုံတွေထောင်၊ ကုန်တွေထုတ်လုပ်ပြီး)ကဲကဲ စက်ရုံလေးတစ်ရုံထောင်ပါပြီတဲ့ ဘယ်မှာလဲ အတတ်ပညာ ဘယ်မှာလဲ စက်ပစ္စည်း၊ ဘယ်နိုင်ငံကရောင်းမှာလဲ... တော်ကြာ ဘောပွတ်ဒုတ်ထိုးလုပ်စားတစ်ချို့က ကုန်းချောလိုက်လို့.. အမေရိကန်က နျူးကလီးယား စက်ရုံဆောက်မလို့ ပါဆိုပြီး သင်္ဘောကြီးနဲ့ လိုက်လာလိမ့်ဦးမယ်၊၆။ စက်ရုံတွေထောင်နိုင်ဖို့ အတတ်ပညာ၊စက်ပစ္စည်းတွေလိုတယ်လေ ဇွတ်အတင်းကြီးထောင်ခိုင်းလို့ ဟိုဟာပဲထောင်လို့ရမယ်.. (စက်ရုံဆောက်ဖို့ တိုင်ပြောပါတယ် :) ..) အခုလည်းအတတ်ပညာတွေရအောင် ၀န်ထမ်းတွေကို ဟိုနိုင်ငံလွှတ်ဒီနိုင်ငံလွှတ်နဲ့ ပညာသင်ခိုင်းပြီး စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ လုပ်နိုင်သမျှလုပ်နေတာပဲလေ.. နောက်ပြီး ရနိုင်သမျှ ပညာတွေကို စုဖို့ အိမ်နီးချင်းတွေ ရနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီး အကျိုးတူတွေ၊ စက်ရုံဆောက်ပေး၊ အလုပ်ရုံဆောက်ပေး ရလာတဲ့ အကျိူးအမြတ်ကို ဘယ်နှနှစ်ထိယူဆိုပြီး လုပ်နေတာတွေကိုလဲ ထမီနဲ့ဒေါ်လာတွေ မျက်စီမှာဖုံး လူတစ်ချို့က ကန့်ကွက်နေကြတာတွေကိုလဲ တွေ့ရမှာပါ။
မောင်လေးကို သနားပါတယ် .... မေးခွန်း ၃ နဲ့ ၄ ပဲဖြေနိုင်လားဟင် ... ကျန်တဲ့မေးခွန်းတွေကော ...ပြီးတော့ စိတ်မကောင်းတာက မောင်လေးဖြေတဲ့ အဖြေတွေက မေးခွန်းကိုဖြေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ အဖြေမဟုတ်တဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ လိုက်ပြောနေလို့ အမှတ်မရပါဘူးကွယ် ... Try Again မောင်လေး ... လိုရင်းဖြေပါ ... မေးတာကိုဖြေပါ ... ဥပမာ ကိုယ့်မကောင်းတာကို ၀န်မခံဘဲနဲ့ ဟိုလူကော ကောင်းလို့လား လိုက်ပြောတတ်တဲ့ ပုံစံမျိုး ... အမေရိကန်ကော ကောင်းလို့လား မေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ ... မောင်လေးရယ် ... ကြိုးစားပါဦး ...
မောင်လေးရယ် ... ၅ ကိုဖြေတာ ... ထောင်ရင် စက်ပစ္စည်း လိုအပ်တာတွေမရှားပါဘူး ... ရောင်းမယ့်နိုင်ငံတွေ အများကြီးပါ ... ဥပမာ ဒယ်ဒီပါးပါးလို့ခေါ်နေရတဲ့ တရုတ်က အများကြီးဝယ်လို့ရပါတယ်၊ ရှရှားကလည်း စက်ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်လို့ရပါတယ်၊ အခုလည်း လက်ရှိအစိုးရက စစ်တပ်ထဲသုံးဖို့ ခေတ်မီစက်ပစ္စည်းတွေ ရုရှားနဲ့ တရုတ်ဆီက ၀ယ်နေပါတယ် ၊ သူတို့လည်း ရောင်းနေတာပဲကို မောင်လေးရယ် ... ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလည်း လာတာမကြာသေးဘူးလေ ... စီးပွားရေးပေါင်းစပ်လုပ်ဖို့ လာပြောတယ်လေ ၊ လိုအပ်တာကူညီမယ်လို့လည်းပြောတယ်လေ မောင်လေးရဲ့ ... မြောက်ကိုးရီးယားကလည်း ကူညီဖို့ အသင့်ပါပဲတဲ့ ... ပိုက်ဆံပေးရင် ထိုက်သင့်တဲ့ ဈေးနဲ့ပဲ ရောင်းမှာပါတဲ့ ... ကဲ မောင်လေးရေ ... လိုအပ်တာ ၀ယ်လို့ရတယ်နော် ... ဈေးလည်း ပုံမှန်ဈေးနဲ့ရမှာ ... မ၀ယ်ဘဲနေတာကိုတော့ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ ...
၇။ (နေပြည်တော်မြို့ကို သွားတည်ပါတယ်၊ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ ကုန်ကျသွားပါတယ်၊ အဲဒီငွေတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်ကိုပဲ ရှယ်ဖြစ်အောင် သလို့ရပါတယ်၊) ရန်ကုန်ကို ပြင်မယ်ဆိုရင် နေပြည်တော်ကို ဆောက်သလောက်ကုန်မယ် ဟုတ်ပီ အဲဒါဆိုရင် ရန်ကုန်ကိုပြင်ပါပြီ ဥပမာ။လမ်းတွေမကြိုက်သေးဘူး နေပြည်တော်ကလို ကွန်ကရစ်လမ်းဖောက်မယ်.. အိုကေ... အဲဒီတော့ဘာလုပ်မလဲ အခုလက်ရှိ ရန်ကုန်ကလမ်းတွေကို ပြန်ဖျက်ရမယ်.. ဟုတ်ပြီနော်.. ပြီးရင်ပြန်ဆောက်ရမယ်.. အဲဒီတော့ ဘယ်လောက်ကုန်မလဲ နှစ်ခါကုန်မယ် ဟုတ်တယ်နော်.. တိုးတက်မှုရလဒ်ကိုလဲ ပြန်ကြည့်ဦး.. နေပြည်တော် ဆောက်လိုက်တဲ့အတွက် စစ်ရေးအရလုံခြုံတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်ကြီးကိုရမယ်.. နောက်ပြီး ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နေရာတစ်နေရာလဲ တိုးတက်လာမယ်.. နောက်ပြီး ရန်ကုန်လဲ အခုလိုပဲ တိုးတက်စည်ကားတဲ့မြို့အနေနဲ့ ပုံမှန်ဆက်ရှိနေတာပဲ အဲဒါမကောင်းဘူးလား.. အဲဒါပြောတာ မင်းတို့က လက်ရှိ အစိုးရဘာပဲလုပ်လုပ် မစဉ်းစားပဲမကောင်းတာပဲ ပြောချင်နေတာကိုးကွ..၈။ အဲဒါပဲ မင်းတို့က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ နေတဲ့အကြားက စစ်ရေးအရလုံခြုံမှုရှိအောင် နောက်တက်လာမယ့် အစိုးရတွေအတွက်လဲ အဆင်ပြေအောင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာသစ်တွေမှာလဲ တိုးတက်လာအောင်လုပ်တာပဲလေ ဘာလို့မလုပ်ရမှာလဲ မင်းပြောတဲ့အသုံးစရိတ်တွေ ဆိုတာ ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးမှုတွေရှိအောင် တိုးတက်မှုတွေရှိအောင် လုပ်နေတာကိုကျတော့မင်းက မျက်ကွယ်ပြုအပြစ်ဖို့နေတာ... ကောင်းသလား
၉။ အဲဒီမေးခွန်းက စစ်အစိုးရကိုမမေးသင့်ဘူးဗျ.. ခုနကပြောသလို စစ်အစိုးရလဲ စီးပွားရေးပိတ်ထားတဲ့ကြားထဲက တိုးတက်မှုတွေရှိအောင်လုပ်နေတာပဲ.. အမှန်တကယ်မေးသင့်တာက ဒေါ်စုကိုမေးရမှာဗျို့အပေါ်ကမသီတာ နံပါတ် ၉ ကအပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့သလို ကောင်းအောင် လုပ်နေကြတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ.. လိုအပ်မယ်ထင်လို့ အဓိကအကြောင်းအရာလေးတွေ ဖြေပြီးရင် ကြားဖြတ်လေးခိုင်းနှိုးပြလို့ ဟက်ထိသွားရင်လဲခွင့်လွှတ်ပါ...၁၀။ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြည်ပကနေပြီး မတိုးတက်ပါဘူး မတိုးတက်ပါဘူးချည်း စွတ်အော်.. ပြည်တွင်းမှာ လုပ်နေတဲ့သူတွေကို ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ် အမှန်တကယ်တိုးတက်နေတဲ့ ဟာတွေကိုကျတော့ အမျိုးမျိုးအပြစ်ရှာဝေဖန်ပြီး ပေါ်တင်ကြီး ဘူးခံငြင်းနေတဲ့ လူတချို့..က ပြည်ပကလူတွေပါ အကြောင်းအရာတွေကို တကယ်တမ်းနားလည်တဲ့ လူတွေကတော့ ပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံတိုးတက်အောင် အေးအေးဆေးဆေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေရယ် ပြည်သူတွေရယ်ပါ။
(မောင်လေးကို သနားပါတယ် .... မေးခွန်း ၃ နဲ့ ၄ ပဲဖြေနိုင်လားဟင် ). မသီတာ မသီတာတို့ ဒီမိုတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ရမ်းတုပ်ခြင်း စွပ်စွဲခြင်းတွေကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်.. လိုရင်းကိုပြောပြပြီးလို့ မဖြစ်သင့်တာကို နှိုင်းယှဉ်ပြလိုက်လို့ ဟက်ထိသွားရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ပါ။ မသီတာပြောတဲ့ ၀ယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ဝယ်လို့ရမှာလဲ တရုတ်လူလည်တွေက ဘယ်လိုကွာလတီအညံ့တွေ ထုတ်ရောင်းတယ်၊ ဘယ်လို ဈေးနဲ့ဝယ်ရတယ်ဆိုတာ မသီတာသိသင့်ပါတယ်.. အဲဒါတွေကဘကြောင့်လဲ မသီတာသဘောပေါက်လား.. ထိုင်းဆိုတာ သိပ်မကြာခင်ကမှ အဆင်ပြေတဲ့နိုင်ငံဆိုတာလဲ သဘောပေါက်ပါ.. ဒါတောင်ထိုင်းက အမေရိကန်ကိုရှိန်နေလို့ ရဲရဲ မလုပ်ရဲပါဘူး.. ကူညီဖို့ပဲပြောထားတာလေ မသီတာ.. လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်မှ မရသေးတာ.. ကဲမသီတာနဲ့ ကိုသက်ဦး အပေါ်က ဒေါ်လာစား မေးထားတာလေးတွေလဲ ဖြေကြပါဦး..
မောင်လေးရယ် ၇ ကိုဖြေတာ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ... ကဲ ရန်ကုန်ကိုပြင်ပြီ ... လမ်းပြင်ရင် လက်ရှိခင်းထားတာတွေကို အကုန်ပြန်ဖျက်ရရောလား မောင်လေးရယ် ... မောင်လေး လမ်းခင်းတဲ့နည်းပညာတွေ သိပ်နားမလည်ဘူးနဲ့တူးတယ်... လမ်းကို ကောင်းနေအောင်သဖို့ လမ်းတွေပြန်ဖျက်ဖို့မလိုပါဘူး ... လမ်းခင်းကတည်းက အောက်ခံဖောင်ဒေးရှင်းလုပ်ထားပြီးသားပါ ... အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ကိုပဲ သေချာခိုင်မာအောင် ပြန်လုပ်ရင်ရပါတယ် ... ပြီးတော့ နိုင်လွန်ကတ္တရာခင်းထားတဲ့လမ်းကို ဘာလို့ ကွန်ကရစ်သွားခင်းမှာလဲ မောင်လေးရယ် ... နိုင်လွန်ဘဲ ထပ်ခင်းမှာပေါ့ ... အဲဒီလောက်တောင် ဒူရသလား ... နိုင်ငံတကာကို ကြည့်လိုက်ပါ ... တစ်ကယ့်မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာ ဘယ်သူမှ ကွန်ကရစ်မခင်းပါဘူး မောင်လေးရယ် ... အခုလည်း ရန်ကုန်မှာ လမ်းတစ်ကယ်ပြန်ခင်းမယ်ဆိုရင် နှစ်ခါကုန်စရာမရှိပါဘူး ...ပြီးတော့ နေပြည်တော်ကို ဆောက်တဲ့အတွက် စစ်ရေးအရ လုံခြုံတဲ့ မြို့တော်ရပြီတဲ့ ... မောင်လေး ပိန်းချက်ကတော့လေ ... တစ်ကယ်တန်းနိုင်ငံတကာက မြန်မာအစိုးရကို ဖြိုချင်ရင် လွယ်လွယ်လေးပါ၊ နေပြည်တော်ကို ဖြိုဖို့လည်း မခဲယဉ်းပါဘူး၊ ခေတ်မီ ဂျက်လေယာဉ်တစ်စီးထဲနဲ့တင် ဖြိုလို့ရပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒုံးခွင်းတဲ့စက်တွေလည်း မရှိပါဘူး ... နေပြည်တော်ကို ဖြိုချင်ရင် လေကြောင်းကနေ ပြာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ် ... အဲဒါဆို မောင်လေးရယ် ဘာလို့ လုံခြုံတယ်ထင်တာလဲ .. ရေလမ်းခရီးမရောက်တာနဲ့ လုံခြုံတယ်ထင်နေလို့လား ... ရန်ကုန်မှာနေလည်း အတူတူပဲ ... နေပြည်တော်မှာနေလည်း အတူတူပဲ ... သူများတိုက်ချင်ရင် အလွယ်လေးပါ ...စဉ်းစားပါဦး မောင်လေးရယ်... ပြီးတော့ စစ်ရေးအရ လုံခြုရေးလိုအပ်ရအောင် ဘယ်သူကလာတိုက်မယ်လို့ စစ်ရေးကြေငြာထားလို့လဲ ... ဘယ်သူမှ မပြောထားပါဘူး ... အဲဒါဆို ဘာကိုကြောက်နေတာလဲ ... ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်မလုံတာပဲ ဖြစ်မှာပါ ...အခုခေတ်ကြီးမှာ ဘယ်နိုင်ငံက နိုင်ငံတော်ရဲ့မြို့တော်ကို ပြောင်းလိုက်တာတွေ့လဲ ... မြို့တော်အသစ်တည်တာတွေ့လဲ ... ဘယ်နှစ်နိုင်ငံရှိလဲ ... တစ်ကယ်ဆို နေပြည်တောမြို့သစ်ကိုတည်တာ အရေးကြီးမလိုအပ်တဲ့အရာပါ ... တစ်ကယ်လိုအပ်လို့ တည်တာဆိုရင် အပြစ်မပြောပါဘူး ... အခုဟာက မတည်လည်း ရတဲ့အခြေအနေပါ ... တစ်ခြားအဓိက လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကို လုပ်ပေးသင့်ပါတယ် ... ပြည်သူတွေအတွက် စီးပွားရေးအခြေခိုင်အောင် အရင်းအနှီးတွေထုပ်ပေး၊ စက်ရုံတွေထောင်ပေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဘာလို့ မလုပ်ပေးတာလဲ ... မရှိလည်းဖြစ်တဲ့ နေပြည်တော်မြို့သစ်ကြီးကိုတော့ ဘာလို့ သွားတည်တာလဲ ... လိုအပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကိုကျတော့ ဘာလို့မကူညီတာလဲ ... မောင်လေးရယ် ... ဒါတွေကိုသိနေရဲ့သားနဲ့ ဘာတွေ လျှောက်ရေးနေတာလဲ...
သက်ဦးရေ မင်းမျက်လုံးတွေမှာ ထမီအုပ်နေပြီဟ..၁။ (ထိုင်းနိုင်ငံ စီးပွားရေးအပိတ်မခံရပါဘူး၊ သူတို့ကကော အရမ်းချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေနိုင်လို့လား၊)မရပ်နိုင်ဘူးလို့ကော ပြောနိုင်သလား မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို ထိုင်ဆိုင်ကယ်ဘီးတွေ ဈေးဘယ်လောက်ရှိတယ်.. ဘယ်လိုလဲဆိုတာ မသိဘူးမလား၊ နောက်ပြီးဆိုင်ကယ်တင် ထုတ်နိုင်တာမဟုတ်သေးဘူးဟ ကွန်ပျူတာတွေပါ ထုတ်နိုင်နေပြီဟ နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာ လေယာဉ်ကွင်းရှိတယ်လေ မင်းမြန်မာကိုလာရင် အဲဒီကတဆင့်လာရတာလေ... အဲဒါစီးပွားေ၇း ရဲ့ရလဒ်တွေပဲ ဒါတောင်ကျန်သေးတယ်နော်.. ငါတို့မသိတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ...၂။ မြန်မာနိုင်ငံက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံရတာ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကနော်.. အေး လက်ရှိအစိုးရတက်ပြီး ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ပဲရှိသေးတာလဲဆိုတာ မင်းသိလား ၅နှစ် ၆ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်.. အဲဒီအတောအတွင်းမှာ ပုန်ကန်ထကြွတဲ့ ပြည်တွင်းသူပုန်တွေကိုလဲ နိမ်နင်းနေရသေးတယ်.. သူပုန်ရှိရင်ဘယ်သူမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလုပ်မှာလဲ ... သဘောပေါက်ပါတယ်နော်.. အဲဒီအချိန်လေးအတွင်းမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို ချမ်းသာတိုးတက်ဖို့ လုပ်နိုင်ပါ့မလား စဉ်းစားပါ.. ဒေါ်စုတောင် နှစ်နှစ်ဆယ်ရှိပြီ လူထုထောက်ခံမှုပေးပါဆိုပြီး တစာစာ အော်နေတာတောင်မှ လက်ရှိအစိုးရကို မယှဉ်နိုင်သေးဘူး....
မောင်လေးရယ် ...အစ်မ ပေးတဲ့ နောက်ဆုံး comment ကို ဘာလို့ဖျက်လိုက်တာလဲ ...့ heart ထိသွားလို့လား ... ဆဲတာမပါ ... တိုက်ခိုက်တာမပါ ...ဖျက်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းလေး သိချင်လို့ပါ ...
အစ်မ ရမ်းတုပ်ရေ.. ကျွန်တော်ဒီဆိုက်က ဒီဆိုက်ပိုင်ရှင် မဟုတ်သလို ဒီဆိုက်အတွက် ကူညီနေတဲ့လူလဲမဟုတ်ပါဘူး ဒီဆိုက်က ကိုဒေါ်လာစားကိုလဲ မသိပါဘူး ဖျက်ပိုင်ခွင့် အာဏာလဲ ကျွန်တော့်မှာ မရှိပါဘူး... ရမ်းတုပ်နေလို့ အစ်မတို့ကို ဘယ်သူမှမယုံကြည်ပါဘူး.. ရမ်းတုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်သင့်နေပါပြီ အစ်မငယ်..
ဒီမိုကရေစီ ကို မြတ်နိုးတယ် လို့ မကြာခဏ ပြော၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောရေးဆိုခွင့် တွေကို လေးစားတယ် လို့ ခဏခဏ ပြောပြီး comment တွေကို approval control တွေခံ cbox တွေ shoutmix တွေကို password တွေထားလို့ထား၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုသူတွေကို ဘန်းလို့ဘန်း၊ ကိုယ် မကြိုက်တဲ့ စာတွေဆို ဖျက်လို့ဖျက် အလုပ်တွေကို အရှက်ကင်းမဲ့စွာလုပ်နေတဲ့ ဘလော့များလိုမဟုတ်ပါ....။ ဘယ် comment မှ ဖျက်ရိုးထုံးစံ လုံးဝ လုံးဝ မရှိ သဖြင့် မသိနားမလည်ပဲ သွေးရူးသွေးတန်း ကယောင်ခြောက်ခြား ပြောဆိုခြင်းများရှောင်ကျဉ်ပါ။Comment တစ်ခုကို blog ပိုင်ရှင်က delete ပေးရင် This post has been removed byablog administrator. လို့ပေါ်ပြီး ကိုယ့် comment ကို ကိုယ့်ဘာကို delete ပေးရင် This post has been removed by the author. လို့ ပေါ်ပါတယ်။ blog မှာ comment ပေးချင်ရင် blog အကြောင်း နည်းနည်းပါးပါးသိအောင် လေ့လာပါ။ အင်္ဂလိပ်လို နဲနဲပါးပါး နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ။ မိန်းမစိတ်နဲ့ ရန်လိုမှုများကို ရှောင်ရှားပါ ပညာမဲ့ အစွန်းရောက် ဒီမို အပေါင်းတို့.....။
ရမ်းတုတ်တာမဟုတ်ဘူး မောင်လေး .. ကျိန်ဆိုကျိန်ပြောရဲတယ် ... တစ်ကယ်ပြောတာ.... နောက်ဆုံးတင်တဲ့ ကွန့်မန့် တစ်ကယ်အဖျက်ခံရတယ်လေ ...
အဲဒါဆိုလဲခွင့်လွှတ် အစ်မ ကျွန်တော် ဒီဆိုက်က မဟုတ်ပါဘူးဗျာ... ကျွန်တော်လဲလာလည် လာဖတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ..
26 December 2010 16:44
အဲဒါဆိုလည်း Sorry ပါမောင်လေး ... အစ်မလည်း ဘယ်သူဖျက်မှန်းသေချာမသိဘဲနဲ့ မောင်လေးထင်ပြီး ပြောမိလို့ .. Sorry နော် ..
ဟုတ်ကဲ့ပါ ရပါတယ်အစ်မ ကျွန်တော်တို့က မြန်မာလူမျိုးတွေပါ မရိုင်းတတ်ပါဘူး ကျွန်တော်မှားခဲ့ရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ခွင့်ပြုပါဦးအစ်မ ကျွန်တော်စာတွေ ဖတ်စရာရှိသေးလို့ပါ...
ဒီစာကို မဖတ်ပါနဲ့။ ကျနော်ပြောမယ်။ ဒီစာကို မဖတ်ပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီစာကို ဖတ်လို့ > ခင်ဗျားအတွက် ဘာမှအကျိုးရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ် အကျိုးမရှိလို့ မဖတ်ရဆိုပြီး >ခေါင်းစဉ် တပ်ထားတာပေါ့။ ခင်ဗျား ဆက်ဖတ်တာဟာ ခင်ဗျားရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပါ။ > တားမြစ်လို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုံးဝမဖတ်ဖို့ ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်။ > ပြောနေရင်းနဲ့တောင် ခင်ဗျားဆက်ဖက်နေသေးတယ်နော်။ ကျနော်က ခင်ဗျား အတွက် > ပြောနေတာပါ။ ခင်ဗျားဒါကို နားမထောင်ဘဲ ဆက်ဖတ်နေတာ ခင်ဗျားအတွက် အကျိုး လုံးဝ >မရှိလို့ပါ။ အခုတောင် ခင်ဗျား ဖတ်လာတာ စာကြောင်းရေ တော်တော်များလာပြီ။ကျနော်က > ခင်ဗျား အကျိုးကို ရှေးရှူပြီး မဖတ်စေချင်တာပါ။ > >ဆက်မဖတ်နဲ့တော့နော်။ လုံးဝကို အကျိုး မရှိဘူး။ အကျိုး လုံးဝလုံးဝမရှိပါ။ > အကျိုးမရှိတာကို မြန်မာလို ဒီထက်ရှင်းအောင် ကျနော်ပြောမပြတတ်တော့ဘူး။ အလားတူဘဲ > .. မဖတ်ပါနဲ့ကိုလည်းဒီထက်ရှင်းအောင် မြန်မာလို ရှင်းမပြတတ်ဘူး။ ဒီတော့ >ရှင်းရှင်းပြောမယ်။ ဆက်မဖတ်နဲ့။ ပြောနေရင်းနဲ့တောင် ခင်ဗျားဖတ်လာတာများသထက် > များလာပြီ။ ကျနော် ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာ၊ မဖတ်ပါနဲ့။ဟုတ်ပြီလား၊ မဖတ်နဲ့တော့။ > ဒီစာထဲမှာ ဘာမှပါမှာ မဟုတ်လို့မဖတ်နဲ့လို့ ပြောနေရတာပေါ့ဗျာ။ လူ့စိတ်ကလည်း > အခက်သား၊မဖတ်ပါနဲ့ဆို တိုးလို့ဖတ်ချင်တယ်။ ခင်ဗျား တိုးလို့ဖတ်လေ၊ ကျနော်က> မဖတ်ဖို့ တားမြစ်ရလေဘဲဗျာ။ မဖတ်ပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဖတ်စေချင်လို့ပါ။ >အခုပြောရင်းနဲ့ စာတောင်တော်တော် ရှည်သွားပြီ။ဒါဘဲ။
27 December 2010 05:54
မသီတာ..ကဘာတွေကွန့် မန့် ပေးလို့ လည်းဗျ..ပြောစမ်းပါအုံးဗျာ...ဒါနဲ့ အမကကော...မေးပဲမေးတတ်တာပေါ့...မဖြေတတ်ဝူးလား..မေးထားတာတွေကိုပြန်ပီးဖောက်သည်..မချတတ်တော့ဝူးပေါ့...မျှလိုက်ပါအုံး...အမတို့ အမျိုးတွေကို..ဘယ်လိုပြန်ဖြေမလည်း..သိချင်လို့ ပါ...
27 အချက် ကိုတော. ကြိုက်သည်။
16 December 2011 01:53
23 January 2012 18:13
I want to peace Myanmar
စီး ပွား ရေး ပိတ် ချင် ချင် သ လောက် ပိတ် ပါစေတို့ နိုင် ငံ မှာ သ ယံ ဇာ တ ပေါ တယ် ဆန် ရေ စ ပါးအ ပြည့် အစုံ ၇ှိတယ် သူ တို့ နိုင် ငံ တွေ လောက် မတိုးတက် တောင် ငါ့ တို့ နိုင် ငံ မ ဆင်းရဲ ဘူး ငါ့ ပြည် သူ တွေ မ ငတ် ဘူး ဆို တဲ့ အ သိ စိတ် ဓာတ် သာ ရှိ ရင်ဒေါ် စု ဆို တာ လဲ မြန် မာ ပြည် ပြန် ရောက် လာ မှာ ဟုတ် ဘူး အာ ဏာ ရှင် ဆို တာ လဲ ဖြစ် လာ မှာ ဟုတ် ဘူး....
ငါ့နိုင်ငံကို စီးပွားရေး ပိတ်ချင်သလောက်ပိတ်ငါ့နိုင်ငံမှာ သယံဇာတပေါများတယ် ဆန်ရေစပါးပေါများတယ်ငါ့နိုင်ငံ ငါ့လူမျိုး သူတို့လို မတိုးတက်တောင် ငါ့နိုင်ငံ မဆင်းရဲဘူးငါ့ပြည်သူတွေ မငတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အသိစိတ်ဓာတ်သာ၇ှိရင် ..ဒေါ်စုဆိုတာလဲ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်ဆိုတာလဲ ဖြစ်လာမှာ ဟုတ်ဘူး
ပြောမယ်နော်... နားထောင်။ မေးခွန်းတွေ အများကြီးမေးပြီး ဘာလုပ်မှာလဲ။ စုကြည်က ဖြေမှ မဖြေတတ်တာ။ သူက NLD မှာရှိနေတဲ့ မဆလခေတ်က သူခိုးတွေရဲ့ ထားရာနေ စေရာသွား၊ မျက်နှာဖြူ ကုလားတွေရဲ့ လက်ကိုင်တုတ်။ ဒီတော့ ဦးနှောက် မရှိတဲ့သူ မစဉ်းစားတတ်တဲ့သူကို ဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လုပ်စာသွားတဲ့ စစ်တပ်၊ NLD အားလုံးဘယ်သူမှမကောင်းဘူး။ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့လစာက တစ်လဘယ်လောက်လဲ။ သူတို့စီးတဲ့ကားက သူတို့ ဘိုးဘွားပိုင်လား။ ဘယ်ကရတာလဲ။ စစ်တပ်က နိုင်ငံတော်ရဲ့ စရိတ်တဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားတာလား။ နိုင်ငံတော်က ချပေးထားတာက Mazda Beep လောက်ပဲချပေးထားတာလေ။ သူတို့စီးလာရင် မီးကြီးတွေဖွင့်ပြိးလာတဲ့ နိုင်ငံခြားက ကားသစ်ကြီးတွေ ဘယ်လိုလခနဲ့ဝယ်တာလဲ။ စစ်ဗိုလ်တိုင်းချမ်းသာကြတယ်နော်။ မျီုးနဲ့ရိုးနဲ့ချမ်းသားတဲ့သူတွေမှ စစ်ဗိုလ်၊ ဗိုလ်မှူးတို့ဖြစ်ကြတာလားဟင်။ မသိလို့မေးတာနော်။
15 February 2013 15:27